विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन विषयलाई राष्ट्रिय नीति कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी चेतना र क्षमता विस्तार गर्ने, हरित जलवायु कोषको उपयोग गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्ने कार्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण छन् । वार्षिक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउने क्षेत्रगत उपलब्धि हासिल गर्ने विषय बढी चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सबल संस्थागत आधार, क्षमता विकास र वित्तीय स्रोत प्रमुख रूपमा रहेका छन् । नेपालजस्ता अति कम विकसित देश पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा माथि बढ्न दिनै नहुने पक्षमा छन् भने विकसित देश २ डिग्रीसम्म पुग्दा फरक नपर्ने बताइरहेका छन् । विश्वबजारमा सौर्य ऊर्जाजस्ता स्वच्छ ऊर्जाको प्रविधिमा व्यापक विकास भइसकेको र सस्तो हुँदै गएकाले पनि विकसित देशले कोइलाजस्ता प्रदूषक ऊर्जाका स्रोतको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न इच्छुक हुनेछन् भत्रे विश्लेषकको बुझाइ छ ।
यो तथ्य पनि सम्झौताका लागि सकारात्मक संकेत हो । अर्कोतर्फ १ सय ५० भन्दा बढी देशले हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसहितको योजना राष्ट्रसंघलाई बुझाइसकेकाले पनि आशा बढेको छ । यद्यपि, उनीहरूले पेस गरेको योजना निकै अधुरो भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । सन् १९९४ मा स्थापना गरिएको राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचनाअन्तर्गत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले विकसित मुलुकहरूकै कारण जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जित भएकाले उनीहरूले नै हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन घटाउन नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नुपर्ने र अति कम विकसित तथा विकासोन्मुख देशलाई जलवायु परिवर्तनबाट परेका समस्यासँग जुध्न आवश्यक आर्थिक सहयोग पनि गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसलाई सो सम्झौताको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा राखिएकाले चीन र भारतलगायतका देशले त्यसैलाई औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, गत डेढ दशकमा चीन र भारतले हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा विकसित देशलाई समेत उछिनिसकेको अवस्थामा उनीहरूले पनि कटौतीको हिस्सा लिनुपर्ने अडानमा धनी मुलुक रहेका छन् ।
विश्वमा हाल हेर्ने हो भने एकातिर विकसित देश आफूले मात्रै उत्सर्जन घटाउन सहमत छैनन् भने मुखले हुन्छ भने पनि अति कम विकसित र विकासोन्मुख देशलाई जलवायु परिवर्तनका समस्यासँग जुध्न चाहिने आर्थिक सहयोग गर्न पूर्ण तयार पनि छैनन् । सन् १९९२ मा विश्वभरिका नेता भेला भएर ब्राजिलको रियो दि जेनिरियो सहरमा जलवायु परिवर्तन यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएकाले त्यसलाई समाधान गर्न विश्वव्यापी सम्झौताको आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रसंघमा जलवायु परिवर्तन हेर्ने छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए । सन् १९९४ मा त्यस्तो निकाय स्थापना गरियो तर वार्ता सुरु भएको १९ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि विश्वका नेता हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौती गर्ने विश्वव्यापी सम्झौता गर्न सफल भएका छैनन् । विश्वभरिका ९७ प्रतिशत वैज्ञानिकले पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि भइरहेको र त्यसको कारण वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बनडाइ अक्साइडजस्तो हरितगृह ग्याँस भएकाले त्यसको उत्सर्जन व्यापक रूपमा कटौती गर्न बारम्बार आग्रह गरेका छन् । जटिल विश्वराजनीति र विकासोन्मुख तथा विकसित देशहरूबीचको आर्थिक विकासको होडबाजीमा त्यस्तो सम्झौता हुन सकिरहेको छैन ।
झट्ट हेर्दा जलवायु परिवर्तन वातावरणीय मुद्दाजस्तो देखिए पनि यो राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा भइसकेको छ । विकास गर्ने क्रममा पश्चिमा मुलुकले कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको व्यापक प्रयोग गरे, जसका कारण वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड ग्याँसको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी हुन गयो र त्यसले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गर्न सहयोग गर्‍यो । विगत केही दशकमा विकासको क्रम विकासोन्मुख देशमा पनि बढ्दो छ र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग पनि बढिरहेको छ । सन् ९० को दशकमा अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्न देश थियो भने अहिले चीनले उसलाई उछिनिसकेको छ ।
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ भने दक्षिणी छिमेकी भारत चौथो स्थानमा छ । यसरी आर्थिक विकासको गति लिइरहेका अर्थतन्त्रलाई यसैगरी उकालो लाग्न दिने पक्षमा पश्चिमा राष्ट्र छैनन् । विकास गर्ने अधिकारलाई लगाम लगाउन जलवायु परिवर्तनलाई अस्त्रको रूपमा पश्चिमा मुलुकले प्रयोग गर्न खोजेको आशंका चीन, भारतलगायतका विकासोन्मुख देशको छ । यही आशंका सम्झौता नहुनुको मुख्य कारणका रूपमा रहँदै आएको छ ।
अन्यमा भन्नुपर्दा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक तथ्यहरूको अध्ययन गर्न स्थापना गरिएको इन्टर गभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्जले सन् १८८१ देखि २००२ सम्ममा पृथ्वीको औसत तापक्रम झन्डै १ डिग्री बढिसकेको बताएको थियो भने त्यसलाई रोक्न आवश्यक विश्वव्यापी पहल तुरुन्तै नगरिए जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले ठूलो विनासको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । सन् १८५० यता विगत ३ दशक सबैभन्दा तातो दशकका रूपमा देखिएको वैज्ञानिक बताउँछन् भने ८ लाख वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्याँस अहिले वायुमण्डलमा जम्मा भएको उनीहरूको दाबी छ । वैज्ञानिकले सन् २००९ मै विश्वव्यापी सम्झौता भइसक्नुपर्ने बताएका थिए तर देशबीच त्यस्तो सम्झौता हुन नसकेपछि सन् २००५ मा जसरी पनि गर्ने सहमति भएको थियो । अहिलेकै गतिमा कोइला र अन्य पेटोलियम पदार्थको प्रयोग बढ्दै गएमा यसै शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम ४.५ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने अनुमान वैज्ञानिकको छ भने उनीहरूले १.५ डिग्रीभन्दा बढी भएमा त्यसले पृथ्वीको जलवायुचक्रमा धेरै नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन् ।
सन् २००९ मा त्यस्तो सम्झौता गर्ने भनिए पनि विश्व नेता सहमत नभएपछि सन् २०२० बाट त्यसलाई लागू गर्ने सहमति भएको थियो । पृथ्वीको तापक्रम कतिसम्म बढ्न दिने र त्यसका लागि कसले, कति कार्बनडाइअक्साइड ग्याँसको उत्सर्जन घटाउने र कहिलेसम्ममा घटाइसक्ने भन्नेमा देशहरूबीच व्यापक असहमित छ ।
१९९७ मा हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन घटाउन जापानको क्योटो सहरमा गरिएको क्योटो अभिसन्धिमा अमेरिकाले अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन भने पहिला सहमत भइसकेका रुस, अस्ट्रेलिया, जापानलगायतका देशले हात झिकेकाले सो सन्धि असफल भइसकेको छ । यसरी विभिन्न समयमा भएको छलफलबाट आआफ्नो देशको हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन ५.२ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने थियो, तर उनीहरू यसमा असफल भए । त्यसपछि म्याद थपिएको भए पनि अमेरिकालगायतका मुख्य उत्सर्जक देशले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छैनन् । यसरी कसैले मान्ने, कसैले नमान्ने खालको नभएर सबैले मात्रे र कानुनी रूपमा बाध्यकारी गराउने खालका सम्झौता हुनुपर्ने माग नेपालजस्ता देशको रहेको छ ।
झन्डै दुई दशक लामो पट्यारलाग्दो वार्ता अहिले निष्कर्षमा पुग्ला त भन्नेमा आशंका रहे पनि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्चतहको राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिएकाले यो सम्मेलनबाट विश्वव्यापी सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश भएकाले विश्वव्यापी सम्झौताले हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन व्यापक घटाउने सहमति गरेमा नेपालजस्ता देशको जोखिम कम हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ । दोस्रो, सो सम्झौताले जलवायु कोषमा धनी मुलुकलाई रकम जम्मा गर्न बाध्य बनाउने भएकाले नेपालजस्ता अति कम विकसित र उच्च जोखिम भएका देशले सो रकमको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । त्यस्तो सम्झौताले हानीभन्दा पनि समग्र पृथ्वीलाई बस्नयोग्य बनाइराख्ने भएकाले लाभहानीका हिसाब यसमा उति महत्वपूर्ण मानिँदैन । यसरी हेर्दा देशमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम सामना गरिरहेको देशमा पर्छ । देशको लागि जलवायु परिवर्तनका कारणको न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न विश्वका विकसित र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने जीवनशैली र आर्थिक आधार परिवर्तन गर्न दबाब दिनु अति जरुरी भइसकेको छ ।
लोकतन्त्रमा पहरेदारी आवश्यक
नागरिकको उत्साहजनक सहभागिताबाट नै नेपालमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । राणाहरुको हुकुमी शासनविरुद्ध आवाज उठाएकै कारण मारिएका दशरथ चन्द, गङालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्रीजस्ता वीर सपुतहरुलाई हामीले श्रद्धापूर्वक सहिदको सम्मान दिएका हौँ ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि बलिदान दिने वीर सपुतहरुको सम्झनामा गरिने जयजय कारमा पहिला पहिला जुन उत्साह भरिएको हुन्थ्यो त्यो अहिले सेलाउँदै गएको छ । सहिद शब्दलाई नै अपव्याख्या गर्नेगरी राज्यले दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरुलाई पनि सहिदको दर्जा दिन थालेपछि यो शब्दप्रति वितृष्णा आउनु स्वाभाविकै हो । सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेसमेतलाई दस लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनकै लागि सहिद घोषणा गरिनु राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय हो ।
नागरिकको मुक्ति र मुलुकको समृद्धिका लागि बलिदान दिने सहिदको सपना साकार तुल्याउनु नै सहिदप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुन सक्छ । प्रजातन्त्रको प्राप्ति कसरी भएको थियो र प्रजातन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रपञ्च कसरी हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा सहिदहरुको बलिदानको स्मरण गर्दै, त्यो उत्सर्ग र यो वितृष्णा खोतल्ने कोसिस यस लेखमा गर्दै छु ।
अहिले मानिस व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएको छ । हिजो देश, नागरिक र समाज सेवालाई सर्वोपरी ठानेर काम गर्ने प्रवृत्ति थियो । आज ठीक उल्टो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि मुलुकलाई नै बन्धकी राख्न तम्सने प्रवृत्ति व्यापक हुँदैगएको छ । देश र नागरिकको हित गौण बन्दै गएको छ । शासन सत्तामा पनि सक्नेको पहुँच छ, नसक्ने अधिकारबाट वञ्चित छन्  । राजनीतिमा विकृति व्याप्त छ । आफ्ना मान्छेलाई पोस्ने प्रवृत्ति, परिवारवाद र नातावाद छ  । समुदायगत र जातिगतरूपमा अवसर प्रदान गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो राम्रो अभ्यास होइन । हाम्रा पुर्खाले यस्तो नेपालको परिकल्पना गरेका थिएनन् । यस्तो शासन व्यवस्थाको सपना देखेका पक्कै थिएनन् । नागरिकका छोराछोरीको समान पहुँच, समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सपना बोकेका थिए, तर आज नागरिककै शासनकालमा पनि नागरिक पीडित हुनपुगे । त्यो राम्रो भएन  ।
शासनसत्तामा बस्ने, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । आफूलाई समयमै सच्याउनुपर्छ  । हिजोको भन्दा आजको शासनबाट परिवर्तनको अनुभूति नागरिकले चाहेका थिए तर त्यो देखिएन । त्यसैले व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ ।
अहिले बहुदलीय व्यवस्था छ  । दलैपिच्छे विचार फरक छन्  । तथापि, देश र नागरिकको हितका निम्ति सबैको समान धारणा बन्न सक्नुपर्छ  । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सबै दलले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिए  । देश र नागरिकको पक्षमा सबैले काम गर्ने अठोट पनि गर्ने गरेका छन् । तर, कुरा एकातिर व्यवहार अर्कोतिर गरेर नागरिकलाई झुक्याउने कोसिस अब नगरे हुन्छ । नागरिकले अब पत्याउँदैनन् । समानता सबैमा लागू हुनुपर्छ  । राज्यको अङ्गमा सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ  । कोहीले सुखभोग गर्ने, कोही नागरिक हेरेर बस्ने वातावरण बन्न दिनुहुन्न । कानुनी राज्यको प्रत्याभूति नागरिकले महसुस गर्नुपर्छ भन्ने आदर्शका मीठा शब्द लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात सुनिँदै आएको हो तर यसको ठीक विपरीतका कार्य नै सबै दल र सरकारका प्राथमिकतामा रहेको हँुदै आएको छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारका क्रियाकलाप भन्दा नागरिकको स्वतन्त्रताले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । मानव अधिकारको सम्मान, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, वैयक्तिक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सूचक हुन् । लोकतान्त्रिक आवरणमा जतिसुकै नागरिक हितमा कुरा गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली, स्वभाव र अधिकांश अभिव्यक्तिले सर्वसत्तावादको संकेत गरिरहेको छ । संविधानतः सार्वभौमसत्ताको स्रोत नेपाली नागरिकलाई मानिए पनि स्वयं प्रधानमन्त्री र दलका शीर्षनेताका क्रियाकलापले नागरिकलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भइरहेको संकेत गर्छ ।
सर्वसत्तावादी नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत उन्नति र आफूहरूले गरेको गलत शैलीको प्रशंसालाई मात्र लोकतन्त्र ठान्छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि यसबाट अछुतो छैन । निष्ठा र आदर्श पन्छाएर व्यक्तिगत व्यापारमात्र चम्काउने लोकतन्त्रको सान्दर्भिकता समाप्त हुनुपर्छ । गुटबन्दी र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ ।
आफैँले लडेर प्राप्त गरेकोे लोकतन्त्र आफ्नै क्रियाकलापबाट असुरक्षित हुन्छ भने यसको पहरेदारी कसले गर्ने ? दलीय नेतृत्वको अगाडि तेर्सिएको गम्भीर प्रश्न हो यो । यतिबेलाको प्रमुख चुनौती लोकतन्त्र रक्षा गर्नु हो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र स्थायित्वका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले पहरेदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
मुलुकमा बलियो सरकार छ । कम्युनिस्ट पार्टीको भए पनि यो कम्युनिस्ट व्यवस्थाको सरकार होइन । तर, कार्यशैली हेर्दा भने अधिनायकवादी कम्युनिस्ट चरित्र सरकारमा देखिन थालेको छ । यो सरकार गठनसँगै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुनसक्ने जुन अडकलबाजी हुँदै आएका थिए त्यसलाई सही सिद्ध तुल्याउने दिशामा सरकारको क्रियाकलाप अगाडि बढिरहेको छ । यसैले आवरणमा लोकतान्त्रिकजस्तो देखिने तर व्यवहार कम्युनिस्ट चरित्र भएको यो सरकारको कार्यशैलीप्रति सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा महत्वपूर्ण मानिने राज्यका सम्बैधानिक अंगलाई पार्टीको प्रभावमा पार्ने र बिस्तारै तिनलाई पार्टीकरण गर्ने काम अहिले नेकपा नेतृत्वको सरकारबाट भइरहेका छन् । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको देखिएको छ । सरकारका गलत क्रियाकलापको खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षी दलका नेता र सत्ता पक्षकै नेताहरुलाई सिध्याउने रणनीतिमा सरकार लागेको देखिन्छ । न्यायालयमा दलीयकरण होस् वा प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका वा निजामती कर्मचारीको पार्टीकरण यी सबै कुराले लोकतन्त्रलाई बिस्तारै कमजोर बनाउने र मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा लैजाने अभिप्राय नेकपा सरकारमा देखिन्छ । यसको सशक्त प्रतिरोध गर्दै सरकारलाई लोकतान्त्रिक मार्गमै ल्याउन नागरिक नै जाग्नुपर्ने बेला आएको छ । समाजका सबै पक्ष, वर्ग, जातजाति, भूगोल र समुदायका बीचमा सरकारको गलत कदमलाई उदाङ्गो बानाउनुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ ।
सरकार र राजनीतिक दलका पछिल्ला क्रियाकलाप हेर्दा लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नेताहरूको चेत खुलेजस्तो लाग्दैन । नेकपाको सरकारले कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक संविधानको मूल मर्मलाई अझै आत्मसात् गर्न सकेको छैन । संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि लड्नुपर्ने बेलामा कांग्रेस भने आन्तरिक नेतृत्व होडमा अलमलिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा पर्न थालेको बेला कांग्रेसभित्र किचलो हुनु मुलुकका लागि शुभ संकेत होइन ।
लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाभित्र मात्र समाजवादको व्यावहारिक प्रयोग सम्भव छ तर सरकारले प्रस्तुत गरेका पछिल्ला विधेयक हेर्दा सरकार साम्यवादी शासन व्यवस्थाउन्मुख हुन खोजेजस्तो देखिन्छ । हामीले बुझेको संविधानमा उल्लेख भएको ‘समाजवाद’को अर्थ समानता हो, न्याय हो र गरिब तथा निमुखा नागरिकका लागि पनि गाँस, बास, कपास तथा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारको ग्यारेन्टी हो । यही संविधानबाट त्यसो गर्न सम्भव छ । त्यो बाटोमा हिँड्न संविधानले रोक्दैन । संविधानको मूल मर्म समतामूलक समाज स्थापना गर्ने हो । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा अपांगता भएका समुदाय तथा व्यक्तिको उत्थानका लागि गरिएको संवैधानिक व्यवस्था त्यसैका दृष्टान्त हुन् ।
संविधानमा सामाजिक र आर्थिक अधिकारसमेत प्रस्टसँग उल्लेख गरिएका छन् । जनभावनाको कदर गर्ने आधार प्रशस्त छन् । यसलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्दा सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन सम्भव छ । तर सरकारले विभिन्न ऐन, नियम बनाएर संविधानलाई नै खण्डित गर्ने काम गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक आवरणमा संविधानको मर्मविपरीतका सरकारी गतिविधिलाई निस्तेज गर्नु आजको आवश्यकता हो । वीर सपुतहरुको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रको पहरेदारी नागरिकले नै गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ । लोकतन्त्रको कवच बनेर आआफ्नो ठाउँबाट सबै जागौँ ।
स्मार्टफोनको युगमा सानी छोरीलाई मैले कसरी किताबको कीरो बनाएँ ?
मेरी आठ वर्षे छोरी फ्लोरा किताबको कीरो नै हुन् । उनलाई पढ्नका लागि बेग्लै कोठा वा ठाउँ चाहिँदैन । बाथरुममा, टेबलमा, बिस्तारामा सिरकमुनि सानो टर्चको सहारामा जहाँ पनि पढ्छिन् उनी । मैले थाहा पाएसम्म दुईपटक त बाटोमा पढ्दै हिँड्दा उनलाई चोट लाग्यो। ‘मलाई केही भा’छैन ममी’, पहिलोपटक ल्याम्पपोस्टमा ठोकिँदा उनले हँसिलो मुहार बनाएर भनेकी थिइन् ।
एउटा उदाहरण दिन्छु, उनले रेष्टुरेन्टमा पढ्दा वेटरहरूले केटाकेटीहरू फोनमा टाँसिनुको साटो किताब पढेको देख्नु त दुर्लभ नै भइसक्यो भनेर सुनाउँछन् । साना पसलहरूमा जानासाथ उनले आफू बसेर पढ्न मिल्ने कुनो भेट्टाइहाल्छिन् र पढ्न बस्छिन् । किनमेल सकिएपछि म उनलाई जाउँ भनेर बोलाउँछु । पसलका सहयोगीहरूले मलाई रोक्दै उनको ध्यान भंग नगर्न अनुरोध गर्छन् । ‘हेर्नुस् न उनी कस्तो मज्जाले पढिरहिछन्,’ उनीहरू मसँग कानेखुसी गर्दै छक्क परेको शैलीमा भन्छन् मानौं मसँग उनले पढेको देख्ने क्षमता नै छैन ।
मलाई मान्छेहरूको यस्तो व्यवहार शुरूमा त अचम्मलाग्दो लाग्यो । मेरो लागि त फ्लोराको पढन्ते स्वभाव सामान्य नै लाग्थ्यो। सायद सन् १९८० को दशकमा उनीजस्तै बच्चा हुँदा म पनि पढन्ते नै भएकाले। मसँग पनि सानो टर्च थियो । त्यसैको सहारामा म रातभर पढ्ने गर्थेँ । म आफैं पढ्दै हिँड्दा ल्याम्पपोस्टसँग ठोकिएको कति घटना अहिले पनि स्मृतिमा ताजै छ। फ्लोराले जस्तै किताब खोलेपछि मैले पनि बाहिर दुनियाँमा के भइरहेछ भन्ने ठ्याम्मै बिर्सिन्थेँ । मलाई किताब पढ्न कुनै जोडबल गर्नै पर्दैनथ्यो। किताब त जादूजस्तो लाग्थ्यो । यो त्यति अस्वभाविक पनि थिएन । बालबालिकाको पढ्ने बानीबारे सन् १९७७ मा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार त्यतिबेला १० देखि १४ वर्षका बालबालिकामध्ये ७५ प्रतिशतले मनोरञ्जनका लागि पढ्ने गर्थे । सन् १९९९ मा म जतिबेला किशोरावस्थाको अन्तिमतिर थिएँ, यो संख्या ७९ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यतिबेला केटाकेटीले पढेको देख्दा को नै छक्क पथ्र्याे र ?
तर, धेरैथोक फेरिएको छ । फ्लोराले सार्वजनिकस्थलमा पढ्दा धेरैको ध्यान तानिन्छ । गत ग्रीष्मयाममा पार्कमा बसिरहेको बेला एकजना बूढीआमा हामीसँग कुराकानी गर्न आइपुग्नुभया े। उहाँले करीब आधा घण्टादेखि फ्लोराले पढिरहेको देख्नुभएको रै’छ । ‘अचेल यस्तो देख्न नै कहाँ पाइन्छ र ?’, हर्षविभोर हुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘अचेल केटाकेटीले पढ्छन् भन्ने मलाई लाग्नै छोडिसक्यो ।’
साँच्ची नै फ्लोराजस्ता किताबका कीरोहरूको संख्या घट्दो छ । ‘नेसनल लिटरेसी ट्रस्ट’का अनुसार सन् २०१९ मा ५३ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र मनोरञ्जनका लागि पढे जबकि सन् २०१६ मा ५९ प्रतिशतले पढ्थे। सन् २०१५ मा ४३ प्रतिशत बालबालिकाले दैनिकरूपमा पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिरको किताब पनि पढ्ने गर्थे। अहिले त्यो संख्या २५ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्को एक अध्ययनका अनुसार जुनसुकै उमेरका भए पनि बहुसंख्यक बालबालिकाले किताबभन्दा बढी डिजिटल स्क्रिन मन पराउँछन् । अधिकांश चित्रकथाका किताबका मुख्य मात्रहरू पुरुष हुन्थे । महिला नायकमात्र होइन खलनायक र हिंस्रक जनवार पनि महिला पाउन मुस्किल पथ्र्यो । पुराना क्लासिकलमा मात्र होइन हालसालै प्रकाशित भएका किताबमा पनि शक्तिशाली पात्रहरू अधिकांश पुरुष नै हुन्थे ।
त्यसोभए सन् २०२० को यो समयमा बालबालिकालाई कसरी किताबको कीरो बनाउने त ? म तपाईंलाई मेरो अनुभव सुनाउँछु । मेरी सानी छोरीलाई पढन्ते बनाउने काम मैले आफ्नो आनन्दबाट सुरू गरेँ । हरेक रात फ्लोरालाई एउटै किताब पढेर सुनाउँदा मेरा पतिलाई खासै फरक पर्दैनथ्यो । मलाई भने दिक्कलाग्दो लाग्थ्यो। त्यसैले मैले किताब प्रदर्शनीहरू चहार्न थालेँ र चित्रकथाहरूको ठूलै संकलन तयार पारेँ। क्लासिकलदेखि बेस्टसेलर किताबहरूको चाङ नै तयार भयो। मैले यी किताब दिनदिनै फेरीफेरी उनलाई सुनाउन थालेँ। र, यसको प्रभाव ख्याल गर्न थालेँ ।
संयोगवश यही विषयमा मैले पछि गएर सुरूमा ‘अब्जर्भर’का लागि र पछि ‘गार्जियन’का लागि खोजमूलक सामग्री नै लेखेँ। तर, त्यतिबेला मैले फ्लोराका किताबमा प्रयोग भएका सर्वनामहरू परिवर्तन गर्ने निधो गरैँ । मैले कलमले किताबमा भएका नामदेखि सर्वनामहरू सबै परिवर्तन गरेँ । यसको स्पष्ट प्रभाव पर्न थाल्यो । त्यसपछि फ्लोराले सुनाउने र लेख्ने कथाका पात्र महिला हुन थाले । उनका कथामा आउने रोबोट, डायनोसर र ब्वाँसाहरू पनि महिला नै हुन थाले । उनी ती महिला नायकहरूबारे कथा लेख्छिन् जो साहसी यात्रामा जान्छन् र डरलाग्दा महिला शत्रुहरूसँग जुध्छिन् । उनी आफैं पनि छोरी भएकीले यस्तो कल्पना गरेकी होइनन् । उनले आफूले जे पढिन् तिनै कथा त लेखेकी हुन् ।
यसरी पात्रहरूको लिंग परिवर्तन गरिदिँदा उनलाई सानैदेखि पढ्न सघायो किनभने उनलाई ती पात्रहरू कल्पना गर्न सजिलो हुन्थ्यो । हरेक दिन उनी किताब पढ्दा रमाउन थालिन् । र, अरू बालबालिकाको जस्तो उनको प्रिय पुस्तक थिएन । ‘फेरि सुनाउनुस् न’ भन्नुको साटो उनी ‘अझै अरू पनि’ भन्थिन् । उनी तीन वर्ष पुगेपछि हामीले उनलाई आफ्नो चित्र कथा आफैं पढ्न भन्यौं । बिहानै ६ बजे हामी उठिनसक्ने भएकाले उनलाई त्यसो भनेका थियौं । आश्चर्यजनकरूपमा यो प्रयत्नले पनि काम ग¥यो । वास्तवमा उनी पढ्न सक्दिनथिन्। उनी त आफूले सुनेका कथा र देखेका चित्र जोड्ने प्रयत्न गर्थिन् । यो अभ्यासबाट पाठ बुझ्ने प्रयत्न पनि सुरू भयो । अनि पढ्ने बानी पनि आफैं हुर्किन थाल्यो ।
उनलाई अझ उत्साहित गर्न मैले आफ्नो पुरानो स्मार्टफोनमा म बच्चा छँदा मन पराउने क्लासिक किताबको अडियोहरू राख्न थालेँ । घरमा र कारमा लामो यात्रामा जाँदा हामी सबैले ती कथा सुन्न थाल्यौं । एनिड ब्लाइटोनको ‘फारावे ट्री’ शृंखलामध्येको पहिलो ‘द इनच्यान्टेड वुड’ सबैभन्दा प्रिय हुन पुग्यो । उनले त्यो किताब १० पटकभन्दा बढी सुनिन् होला । मलाई भने दिक्क लाग्यो । अनि मैले उनलाई रोआल्ड डहल, एडिथ नेस्विथ र रिचमल क्रोम्प्टोनका किताब सुनाउन थालेँ ।
उनलाई शताब्दीअघि लेखिएका किताब भए पनि फरक पर्दैनथ्यो । उनले सबै शब्द बुझ्दा पनि बुझ्दिनथिन् । कथाले बोकेको परिवेश, कथावाचकको शैली र आवाजले उनलाई कथा बुझ्न मद्दत गथ्र्यो । त्यसो त हरेक रात हामी उनका लागि किताब पढ्थ्यौँ । उनलाई सुनाउनकै लागि मैले आफूले बाल्यकालमा पढेका किताब दोर्होयाएँ पनि ।
विद्यालयमा पढ्न जाँदा उनको शब्दज्ञान पनि प्रचुर थियो र पाठ बुझ्ने क्षमता पनि बलियो थियो । यसले उनको पठनलाई सजिलो बनायो । उनले पढ्न जोडबल गरिरहँदा मैले भन्ने गर्थेँ – पढ्नसक्नु भनेको जादूको साँचो हुनुजस्तो हो, यसले नयाँ संसारको ढोका खोलिदिन्छ । मलाई लाग्छ, उनले मैले भनेको बुझ्थिन् । ठूलो स्वरमा पढ्नको साटो उनले आफ्नै ‘अडियोबुक’ बनाउँथिन् । मलाई किताब पढेर सुनाउँदा उनले रेकर्ड पनि गर्थिन् र पछि त्यो सुन्दै किताबमा औंला दौडाउँथिन् । यसबाट उनी पढ्नुको आनन्द लिइरहिछन् भन्ने देखिन्थ्यो । उनी पाँच वर्षको भएपछि मैले उनका लागि आर्नोल्ड लोबेलको रोचक कथा संग्रह ‘भ्यागुतो र चेपाको खजाना’ ल्याइदिएँ । र, ग्रीष्मको अन्त्यसम्म त्यसका हरेक कथा ठूलो स्वरमा वाचन गर्न उत्साहित गरेँ । त्यो काम पूरा गर्दा उनी आफैंप्रति गर्वान्वित भइन् ।
त्यो वर्षको सेप्टेम्बरदेखि मैले समाचार र कहिलेकाहीँ फिल्म हेर्नेबेलामा बाहेक टेलिभिजन बन्द गरेँ । अडियोबुक सुन्नेबेलामा बाहेक स्मार्टफोन र ट्याब्लेट प्रयोग पनि बन्द गरिदिएँ । म खासमा उनलाई हरेक दिन केही न केही फुर्सदिलो समय हुन्छ र गृहकार्य सकेपछि सबै काम सकिँदैन भन्ने ढुक्क बनाउन चाहन्थेँ । त्यसपछि मैले ‘द इन्च्यान्टेड वुड’ भन्ने किताब किनेर ल्याएँ र त्यो क्षण नआउँदासम्म पर्खिबसेँ । आखिर त्यो क्षण आइहाल्यो जब उनले भनिन्, ‘ममी मलाई दिक्क लाइसक्यो ।’ ठ्याक्कै त्यतिबेला मैले उनलाई त्यो किताब दिएँ । त्यही किताब किन्नुको पनि कारण थियो । माथि नै उल्लेख गरेँ, अडियोबुकमा उनको सबैभन्दा प्रिय किताब नै त्यहीँ थियो । त्यसको कथासँग भिजिसकेकाले उनलाई पढ्न सजिलो होला भनेर मैले त्यो किताब रोजेकी थिएँ ।
मेरो यो प्रयत्न त सलाई कोरेजस्तै भयो । पाँच वर्षकी ती फुच्ची त मौन पठनमा पो लागिपरिन्। किताबप्रतिको उनको भोकको सीमा रहन छोड्यो । संयोगवश सस्ता किताब पसलहरू प्रशस्त थिए । हामीले एकअर्कासँग किताबबारे जहाँसुकै कुरा गर्न थाल्यौं । हामी नियमितरूपमा पुस्तकालय पनि जान थाल्यौं । पुस्तकालयमा मैले एक घण्टा बिताउँथे, त्यतिन्जेल उनले आफूलाई मन पर्ने किताब फेला पार्थिन् । पुस्तकालयमै उनले ‘हरिड हेनरी’ र ‘रेनबो फेयरिज’ जस्ता शृंखलाहरू फेला पारिन् । र, उनी तिनैमा टाँसिइरहिन् । उनले रोआल्ड डहलका सबै किताब दुईपटक पढिन् । त्यसपछि उनी डेभिड वालियम्स र एन्डि स्टान्टोनका किताबमा हराउन थालिन्। यी रमाइला लेखकले उनलाई खुब हाँसो उठाउँथे । किताब पढ्दापढ्दै उनी खित्का छोडेर हाँस्थिन् । सातौं जन्मदिनमा उनले ‘डायरी अफ् अ विम्पी किड’ (कायर बच्चाको डायरी) पाइन्। त्यसपछि उनले यसको सबै शृंखला पटक–पटक पढिरहिन् । म ढुक्क छु, उनले पढेजति सबै बुझ्दिनन् तर उनले आफूले त्यसो नगरेकोमा वास्ता नि गर्दिनन् । मलाई पनि खासै मतलब छैन । उनले आनन्दका लागि किताब पढ्छिन् किनभने उनी किताबलाई प्रेम गर्छिन् । म ढुक्क छु, सधैँभरि किताबलाई माया गरिनै रहनेछिन् । आखिर उनी किताबको कीरो न हुन् ।
(गार्जियनमा प्रकाशित फर्गुसनको लेखको भावानुवाद गरिएको हो ।)
पुस्तकमा करको अर्थ
-डा. दिलनाथ दंगाल
कर सबै देशवासीले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने तिरो हो । भनिन्छ, कर र मृत्यु अवश्यम्भावी कुरा हुन् । राज्यमा थोरै आय हुनेले थोरै र धेरै आय हुनेले धेरै कर तिर्ने व्यवस्था भयो भने न्यायसंगत मानिन्छ । देश विकासका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सरकारले समय समयमा करका दरहरूमा परिवर्तन गर्ने गर्छ भने यसको दायरालाई पनि फराकिलो पार्छ । करको दायरा फराकिलो पार्ने क्रममा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमार्फत विदेशमा मुद्रण भई आयात भएका पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो कर नयाँ भए पनि विश्वका प्रकाशकहरूको संगठन (आईपीए) र युरोपेली फेडेरेसन अफ युरोपियन पब्लिसर्स (फेप) ले ३६ वटा युरोपेली देश, १३ वटा एसियाली देश, १३ वटा अफ्रिकी देश, ९ वटा ल्याटिन अमेरिकी देश, ५ वटा मध्यपूर्वका देश तथा क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड गरी विश्वका ७९ देशमा गरेको सर्वेक्षणले विश्वका अधिकांश देशमा पुस्तकमा कर लगाएको देखाएको छ । सर्वेक्षणले ६० प्रतिशत देशले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाएको र ७५ प्रतिशत देशले ई–बुकमा भन्सार महसुल लगाउने गरेको समेत देखाएको छ । विश्वभरका २२ प्रतिशत देशले मुद्रित पुस्तकमा मूल्य अभिवृद्घि कर लगाएका छन् र ३९ देशले कर लगाएका छैनन् भने ६९ प्रतिशत देशले ई–बुकमा कर लगाएका छन् ।
सर्वेक्षणका अनुसार ३७ वटा देशले मुद्रित पुस्तक र ई–बुक दुवैमा एउटै दरमा भन्सार महसुल लगाएका छन् भने ३५ वटा देशमा ई–बुकको तुलनामा मुद्रित पुस्तकमा करको दर कम छ । यी देशमा ई–बुकमा औसतमा १२.२५ प्रतिशत र मुद्रित पुस्तकमा ५.७५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । त्यसैगरी एसियाली देशहरूले पुस्तकमा लगाएको औसत मूल्य अभिवृद्घि कर ८.६ प्रतिशत छ भने युरोपेली देशहरूमा मूल्य अभिवृद्घि करको दर २१ प्रतिशत छ । अधिकांश अफ्रिकी देशहरूले मुद्रित पुस्तकमा मूल्य अभिवृद्घि कर लगाएका छैनन् । डेनमार्कले सबैभन्दा बढी २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्घि कर लगाएको छ । ई–बुकमा सबैभन्दा बढी २७ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्घि कर लगाउने देश हंगेरी हो । छिमेकी मुलुक चीनले १३ प्रतिशत, इन्डोनेसियाले १० प्रतिशत, जापानले ८ प्रतिशत र इजरायलले १८ प्रतिशत औसत रूपमा पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को) सँगको सम्झौतालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि अल्पविकसित देशहरूमा पुस्तक आयातमा कर लगाउन पाइन्छ । फ्लोरेन्स एग्रिमेन्ट भनेर चिनिने सन् १९५० को युनेस्कोको पाँचौं जनरल कन्फरेन्सले शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक वस्तुको आयातका विषयमा भएको समझदारीपत्रको पहिलो अनुच्छेदमा पुस्तकसहित ५ शीर्षकका वस्तु निर्वाध आयात गर्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि पत्रको दोस्रो अनुच्छेदको अन्तिममा अल्पविकसित देशका हकमा स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि निर्यात प्रभावित पार्ने वस्तुको आयातमा अंकुश लगाउन सक्ने र आन्तरिक बजारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट पनि नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले पुस्तकमा कर लगाउन पाउँछ ।
पुस्तकमा कर लगाउँदा कागजदेखि मसीसम्म सबैमा कर तिर्ने नेपालका मुद्रण उद्योगको संरक्षण हुने, स्वदेशमा मुद्रण उद्योगको विकास, विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने, मुद्रित सामग्रीमा भन्सार महसुल लाग्दा एक खर्ब लगानी भएको ७ हजारवटा छापाखानाले बिना कर पुस्तक भिœयाउने सँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, पाठ्यपुस्तक छपाइमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने र यो कर ज्ञानमाथि नभई नाफामाथि लगाउन खोजिएको हो भन्ने तर्क पुस्तकमा कर लगाउनुपर्छ भन्नेहरूको छ । मुद्रण व्यवसायीहरू कागजमा एकपटक भन्सार कर र पुस्तक छाप्दा मूल्य अभिवृद्धि कर गरी दोहोरो कर उनीहरूले तिर्नुपर्छ भने तयारी पुस्तक ल्याउने व्यापारीहरू यी दुवै करबाट मुक्त हुने तथा राज्य पनि राजस्व संकलनबाट वञ्चित हुने तर्क राख्छन् । कि त पत्रपत्रिका छपाइमा ल्याउने कागजलाइ कर छुट दिए जसरी हामीलाई पनि कर छुट दिनुपर्‍यो, नत्र पुस्तकमा पनि कर लगाउनुप¥यो भन्ने उनीहरूको तर्क छ । यो हेर्दा स्वदेशी मुद्रण उद्योगीहरू भने बजेटमार्फत ल्याइएको करको यो प्रावधानका पक्षमा छन् । मुद्रण सामग्रीको कच्चा वस्तुका रूपमा आयात हुने कागजमा भन्सार लाग्ने तर तयारी मुद्रित पुस्तकमा कर नलाग्ने भएपछि नेपालका पुस्तक प्रकाशकका लागि भारतमा मुद्रण गर्दा सस्तो पर्ने हुँदा भारतमै छाप्न पठाउने चलन रहेको नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरू बताउँछन् भने विदेशमा मुद्रण भएका र नेपालबाटै बाहिरी मुलुकमा पुस्तक मुद्रण गराएर ल्याउने विक्रेता भने यो करकोे विरोधमा छन् ।
यो करको विरोध गर्नेहरूले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका अनिवार्य विषयका कतिपय पाठ्यपुस्तक विदेशी नै रहेको र करका कारण आयात रोकिएमा गलत व्यक्तिले नक्कली पुस्तक तयार गरी लुकिछिपी बिक्री वितरण गर्ने सम्भावना रहेको, करका कारण विदेशी पुस्तक महँगो हुने, संविधानको धारा ३१ को शिक्षामा पहुँचको हक र ५१ (ज)मा उल्लेख भएको सहज, गुणस्तर र पहुँच योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्यविपरीत पुस्तकमा कर लगाएर सरकारले पठन संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको, पुस्तकमा कर लगाउनु व्यावहारिक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने र कर तिर्न सक्ने क्षमता वा मनोविज्ञानका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले विश्लेषण गर्न नसकेको, ज्ञानमा कर लगाएर देश विकास सम्भव नहुने, ज्ञानको दायरा वा प्रवाहलाई सीमित गर्दा आउने दीर्घकालीन प्रतिकूलताको मूल्य पुस्तकबाट प्राप्त हुने सानो राजस्वभन्दा धेरै भारी हुने, नेपालमा विशिष्टीकृत मेडिकल, पारामेडिकल तथा अलाइड हेल्थ साइन्समा ९० प्रतिशतभन्दा माथि र एमबीबीएसलगायत स्वास्थ्यका अन्य स्नातक तहका कोर्सहरूमा करिब ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय आयातित पुस्तकमा निर्भर रहेको हाम्रो शिक्षामा नकारात्मक असर पर्ने, विकसित तथा अन्य मुलुकमा पुस्तकमा कर लगाउने नियम नभएको तर्क गरिरहेका छन् ।
अहिले भारतबाट ८० र अन्य मुलुकबाट २० प्रतिशत पुस्तक आयात भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत सबै आयातित पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा नेपालका लागि पहिलो भने होइन । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउने प्रयास गरेका थिए तर उक्त प्रयास सफल हुन सकेन भने शाही कालका अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले पनि ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने उल्लेख गरेका थिए, तर त्यो पनि सफल भएन । नेपालका छापाखानाले पुस्तक छाप्नका लागि आवश्यक कच्चापदार्थमा २८ प्रतिशत भन्सार तिर्दै आएकाले आयातित पुस्तकमा सोही अनुसार नै कर लगाउनुपर्ने नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको तर्क छ भने अर्कातिर पुस्तक व्यवसायीले पुस्तक आयात गर्दा भन्सारमा कम मूल्य देखाउने र पाठकबाट बढी शुल्क असुल्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
करको दर नबढाई यसको दायरा फराकिलो पार्ने नीतिअनुसार पुस्तकमा कर लगाउनु नराम्रो भने होइन । अंकित मूल्यभन्दा बढीमा पुस्तक बिक्री–वितरण नहुने हुनाले पुस्तकमा कर लगाउँदा मूल्य बढ्ने होइन कि व्यापारीको नाफा घट्ने हो । त्यसैले मौरीले फूलको रस चुस्दा फूललाई कुनै नकारात्मक असर नपरे जसरी पुस्तकमा कर लगाउँदा पुस्तक व्यापारीलाई पनि अतिरिक्त भारको नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन । यसो गर्दा व्यापारी कर तिर्न सधैं उत्प्रेरित हुन्छन् । उत्प्रेरणा जगाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । व्यापारीले आफूले तिरेको करको सदुपयोग नभएको अनुभूति गर्नु हँुदैन । आफूले जीवनभर तिरेको करबाट वृद्धावस्थामा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा हुने प्रत्याभूति सरकारले करदातालाई दिनुपर्छ । यसरी पुस्तकमा कर लगाउँदा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर कर तिर्ने सम्पूर्ण पक्षलाई सँगै हिँडाउँदै तथा पाठक र पठन संस्कृतिलाई निरुत्साहित नपार्ने गरी सरकारले कर नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । पुस्तकमा मात्र होइन, अहिले लगभग करको दायराबाहिर रहेका घरबहाल कर, निर्माण सामग्री विव्रmेताले तिर्ने कर, ग्रिल उद्योगहरूले तिर्ने कर, कृषि उत्पादन जस्तो— टनेल खेती, माछापालन, कुखुरापालन, त्यसैगरी लेखकको रोयल्टी कर, घर निर्माण गर्ने ठेकेदार र श्रमिकले तिर्ने कर, विभिन्न खुद्रा पसलेले तिर्ने कर, अन्य पसलेहरूले तिर्ने कर, मनोरञ्जन कर, खानी रोयल्टी कर, इँटाभट्टाले तिर्ने करलगायत अन्य थुप्रै शीर्षकमा जनताको बिना कुनै चित्तदुखाइ सहज ढंगले कर संकलन गर्न सक्ने हो भने देश विकासका लागि चाहिने आवश्यक राजस्व संकलन गर्न मद्दत पुग्छ ।
(त्रिविका उपप्राध्यापक दंगालले करमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ ।)
कुन ‘मास्क’ उपयुक्त हुन्छ, कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न ?
-डा. रामदेव पंडित
गत डिसेम्बर ३१ मा चीनको हुबेइ प्रान्तको उहानबाट नयाँ कोरोनाभाइरस आतंक सुरु भयो। संक्रमणको प्रभाव यति भयंकर होला भन्ने कसैले कल्पना गरेका थिएनन्।
फेब्रुअरीको मध्यसम्म आउँदा झन्डै २१०० मानिसले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाइ सकेका छन्। विश्वभर ७० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण र १ हजार चिनियाँ स्वास्थकर्मीलाई संक्रमण देखिएको पुष्टि भएको छ।
चीनबाहेक २५ मुलुकमा यो भाइरसको संक्रमण फैलिएको पाइएको छ। यो विश्वकै लागि ठूलो समस्या बनेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वभर संकट नै घोषणा गरेको छ।
धुलो र धुवाँबाट जोगिन नेपालीले निक्कै पहिलेदेखि नियमित रूपमा अनुहारमा मास्क लगाउँदै आएका थिए। नेपालमा मास्कले चर्चा पाएको सन्दर्भ पक्कै नयाँ होइन। धैरेपटक सदनदेखि सडकसम्म मास्कले यहाँ चर्चा पाउँदै आएको छ। तर, मास्कले अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित तुल्याउन सकेको थिएन। नेपालले चीनलाई मास्क निर्यात गर्नसक्ने अवस्था बनेको थिएन।
मास्कप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो
विश्व चर्चामा रहेको नोबेल कोरोना भाइरसका कारण मास्क लगाउनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। अतः मास्क अन्तर्रा्ष्ट्रिय चर्चा र चासोको बिषय बनेको छ। विश्व अर्थबजारमा विभिन्न रूपमा मास्कको चर्चा भइरहेको छ।
भाइरस नसरोस् भनी सर्वसाधारणले व्यक्तिगत रूपमा सतर्कता अपनाउन मास्क प्रयोग थालेका छन्। भीडभाडमा होस् या बाटोमा, अस्पतालमा होस् या विमानस्थलमा मास्क लगाउने मानिस बढेका छन्। चीनियाँ बजारमा मास्कको अभाव भएको छ। कसैकसैले प्लास्टिकले पूरै शरीर छोपेका छन् त कसैले प्लास्टिकको बोतलले मुख छोपेका छन्। कोरोना भाइरस प्रकोपका कारण मास्क अभाव भएपछि चीनले बेइजिङमा ६ दिनभित्रै मास्क फ्याक्ट्री बनाउने समाचार बाहिर आएको थियो।
छिमेकी राष्ट्रद्वारा मास्क निर्यातमा रोक
विश्वको सबैभन्दा ठूलो मास्क उत्पादक राष्ट्र चीनले गत वर्षमात्र पाँच अर्ब मास्क उत्पादन गरेको थियो। तथापि, कोरोना भाइरसको प्रकोपसँगै उसले प्रति दिन उत्पादन गर्ने एक करोड ५० लाख मास्कले हालको चुलिँदो माग धान्न सकिरहेको छैन ।
चीनको उहानबाट फैलिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि हुन सक्ने भन्दै नेपाल सरकारको सरकारी निकाय औषधी व्यवस्था विभागले रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ त्रिपुरेश्वरलाई माघ २० गते पत्राचार गरेर मास्कलगायत सामग्री निर्यात नगर्न भनेको छ। भारतले त माघ १७ मै मास्क निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
बजारमा मास्कको अभाव
कुनै कुराको आवश्यकतासँगै अभाव र मूल्य वृद्धि हुनु त बजारको नियम नै हो। कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिँदै गएपछि चीनमा सर्जिकल मास्कको हाहाकार भएको छ। चीनलाई मास्क आपूर्ति गर्न हम्मे भएको छ।
नेपाली बजारमा मास्कको चरम अभाव देखिएको छ। बजारमा पाइएका मास्कको मूल्य पनि अत्यन्तै महँगो भएको छ। मास्कको कालाबजारी सुरु भएको देखिन्छ। व्यापारी लाखौंलाख मास्क चीनलाई आपूर्ति गरी रातारात व्यापारमा सक्रियता बढाएका छन्। भारतीय सीमा र चिनियाँ सीमाक्षेत्रमा मास्क तस्करी भइरहेको हुनसक्छ।
यस बेला चीनमा मास्कको अभाव भएपछि नेपाल सरकारले एक लाख प्रोटेक्टिभ मास्क चीनलाई सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराइसकेको छ। अमेरिकाले १८ लाख मास्क र ८० हजार आइसोलेसन गाउन सहयोग उपलब्ध गराउने बताएको छ। नेपालमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था बीआइए फाउन्डेनले १ लाख थान मास्क सहयोग गरेको छ। बीआइएले रेडक्रस सोसाइटी अफ चाइनालाई काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी उक्त मास्क प्रदान गरेको बीआइए फाउन्डेसनका अध्यक्ष गोकर्ण ढंगानाले बताएण्। व्यापारिक हिसाबले अमेरिका, बेलायत, कोरियालगायत कैयौं देशबाट सर्जिकल मास्क चीनमा निर्यात हुँदै आएको छ।
चीनलाई कमजोर र लाचार देखाउन पनि शक्ति राष्ट्रले चीनलाई सस्तो मास्क सहयोग गर्ने कूटनीति चालेको देखिन्छ। शक्तिशाली चीन मास्कजस्तो सामग्री पनि सबै जनताका लागि सहज आपूर्ति गर्न योग्य छैन भन्ने देखाउन पनि खोजिएको छ। यसरी शक्ति राष्ट्रले चीनमा व्याप्त कोरोना प्रकोपलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ।
नेपाली बजारमा तीनथरी मास्क पाइन्छन्। कपडाको मास्क (२ पत्रे), मेडिकल वा सर्जिकल मास्क (३ पत्रे) र अर्को ‘ एन९५’ मास्क, जसलाई विशेषगरी भाइरस प्रतिरोधी मास्क भनिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले ‘एन९५’ मास्कलाई प्रमाणित गरेको छ। सिंगापुरीहरुको मतमा भाइरस लागेका बिरामी उपचार गर्ने चिकित्सकका लागि ‘एन ९५’ मास्क उपयुक्त हुन्छ। सर्वसाधारणलाई यस्तो मास्क लगाउँदा सास फेर्न गाह्रो हुने र फिटिङ गर्न समस्या हुन्छ। मास्क मात्रै भाइरसको ओखती होइन।
मास्को फरक–फरक प्रयोजन र मूल्य
‘एन९५’ मास्कलाई नेपाली बजारमा साढे तीनदेखि चार सय रुपैयाँसम्म पर्छ। यसमा फिल्टर जडान गरिएको हुन्छ, र, यसबाट सास फेर्न पनि मिल्छ। त्यसका अलावा सामान्य ‘एन९५’ मास्क पनि पाइन्छ, जुन प्रयोग गरेपछि फ्याँक्नुपर्छ। यसको मूल्य नेपाली बजारमा ९० रुपैयाँ पर्छ। यो मास्क लगाएर सधैं बाहिर हिँड्न सम्भव हुँदैन।
बजारमा सर्जिकल मास्क अधिकांश मान्छेले लगाएको पाइन्छ। यस मास्कको बजार मूल्य ५ देखि १० रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ। सर्जिकल मास्कले शतप्रतिशत रोक्ने र पूरै सुरक्षित हुने भन्ने हुँदैन।
तर, धेरै हदसम्म सङ्क्रमणलाई रोक्छ र, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट भने अवश्य बचाउँछ। सर्जिकल मास्क लगाएर शतप्रतिशत ढुक्क हुने भन्ने चाहिँ होइन। सामान्यतया बजारमा कालो, सेतो र नीलो रंगका सर्जिकल मास्क उपलब्ध देखिन्छन्। यसमध्ये प्रयोगकर्ताको छनोटमा चाहिँ निलो र सेतो रंगको मास्क रहेको पाइएको छ।
धुलो र धुवाँ छेक्ने कपडाको मास्क लगाउनु धेरै राम्रो मानिँदैन किनभने यसले कुनै किसिमको सङ्क्रमण रोक्न मद्दत गर्दैन। कपडाको मास्क बजारमा २ देखि ५ रुपैयाँसम्म पर्छ।
नेपालमा मास्क उत्पादन
नेपालका मास्क उत्पादक आफ्नै खालको समस्यामा रहेका देखिन्छन्। नेपालले तयारी अवस्थाको मास्क र मास्क उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ दुवै चीनबाट आयात गर्दै आएको छ।
चीनबाट अहिले कच्चा पदार्थको आयात हुन सकेको छैन। प्रति दिन ६ हजार मास्क उत्पादन गर्ने धुलिखेलको क्लिन सिटी प्रालिका अनुसार उत्पादन लागतभन्दा आधा पैसामा मास्क बेच्नुपर्ने बाध्यता छ।
कच्चा पदार्थका आयातका लागि भन्सारमा ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ। जबकि रेडिमेड मास्क आयातकर्ताले तयारी अवस्थाको मास्कका लागि १५ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्छ। नेपालमा प्रति मास्क उत्पादन मूल्य लगभग तीन रुपैयाँ जति पर्न जान्छ, जबकि आयातीत रेडिमेड मास्क मात्र २ रुपियाँमा बजारमा पाइन्छ। यसरी मास्क उद्योगका लागि नेपालमा समस्या रहेको छ।
औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार हाल नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा आबद्ध दुई दर्जनभन्दा बढी मास्क उत्पादन गर्ने उद्योग छन्। जसले दैनिक २ देखि ३ हजार मास्क उत्पादन गर्ने गरेको पाइएको छ।
उद्योगले बजारको मागअनुसार विभिन्न रंग र आकारमा ७ प्रकारका मास्क उत्पादन गर्दै आएका छन्। त्यसमध्ये नेपाली बजारमा ती उत्पादनको मूल्य ५ रुपैयाँ देखि १ हजारसम्म पर्दछ।
नेपाल सर्जिकल उपकरण व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरज घिमिरेका अनुसार अस्पताल र सार्वजनिक खपत गरी मासिक रूपमा बढीमा १० लाखसम्म मास्क नेपालमा खपत भएको पाइन्छ।
मास्क उत्पादनमा फरक लगानी
एप्पलका लागि आइफोनको उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने ताइवानी मोबाइल फोन उत्पादक मल्टिनेसनल फक्सकनले हालै सर्जिकल मास्कको उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। रोयटर्सले जनाएअनुसार यसै वर्षको सुरुआतमै कोरोना भाइरसको प्रकोपसँग जुध्न सान्जेनस्थित आइफोन उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो कारखाना बन्द गरेको फक्सकनले चीनमा हाल ब्यापक मागमा रहेको मेडिकल मास्क उत्पादन गर्ने जनाएको हो।
यसैगरी विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी कार उत्पादक जेनेरल मोटस्र्ले पनि कोरोना भाइरसको निवारणमा टेवा र्पुयाउने उद्देश्यका साथ सर्जिकल मास्क उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसको चिनियाँ साझेदार एसएआइसी–जीएम–वुलिङले तत्कालै दिनको १७ लाख मास्क उत्पादन गर्ने गरी १४ वटा प्रोडक्सन लाइन तयार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
चीनको स्वामित्वमा रहेको एसियाकै सबैभन्दा ठूलो पेट्रोलियम रिफाइनरी सिनोपेकले गत हप्ता मास्क उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गरिसकेको छ । एघार वटा प्रोडक्सन लाइनबाट मास्क तयार पारेको उसले बताएको छ। यसैगरी टोयोटा र होण्डका लागि कार उत्पादन गर्ने ग्वान्जाउ अटोमोबाइल ग्रुपले पनि मास्क र सो निर्माणका लागि आवश्यक उपकरणको उत्पादन गर्ने बताएका छन्।
मास्क लगाउँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी
कुन मास्कले कति हदसम्म अस्वस्थकर कण रोक्न सक्छ भन्ने कुरा त्यो कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । सर्जिकल मास्क खुकुलो हुन्छ । नयाँ मास्क चेप्टो हुन्छ । लगाइसकेपछि सही तरिकाले निकाल्नु र सुरक्षित तरिकाले विसर्जन गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
लगाइराखेको बेला मास्कलाई सकेसम्म हातले छुन हुँन्न। मास्क फुकाल्ने बेलामा पनि अगाडिको भाग नछोइ पछाडिबाट तुना निकाल्नुपर्छ। मास्क निकालिसकेपछि तुरुन्तै साबुनपानीले हात धुनुपर्छ ।
मास्क बिग्रेको छ, भिजेको छ वा सास फेर्न गाह्रो हुने भएको छ भने लगाउन हुँदैन। एक पटक लगाउन बनाइएका मास्क पुनः प्रयोग गर्नु हुँदैन। एक जनाले लगाइसकेको मास्क अर्को व्यक्ति बिर्सेर पनि लगाउनु हुँदैन।
मास्कमाथि नेपाली अनुसन्धान
मास्कले धूलोका कण कति प्रभावकारी ढंगले रोक्न सक्छ भन्नेबारे अनुसन्धाता भानु न्यौपाने र वसन्त गिरीले सन् २०१९ मा अनुसन्धान गरेका थिए। अनुसन्धान अनुसार घरबाहिर निस्किने सयमध्ये करिब तीस काठमाडौंबासीले मात्रै मास्क लगाउने गर्दछन् । यसोभन्दा काठमाडौंमा बस्ने ४० लाख जनतामध्ये लगभग १२ लाख जनताले मास्क प्रयोग गर्ने गर्छन्। त्यसै अनुसारको लगानी, उत्पादन, रोजगारी र बिक्री–वितरण हुँदै आएको थियो।
अनुसन्धान अनुसार काठमाडौंमा मास्क लगाउनेमध्ये दुई तिहाईभन्दा बढीले कपडाको मास्क लगाउने गर्छन्। त्यस्तो मास्क अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने कपडाबाट स्थानीय रूपमै बनाइन्छ र, सस्तो मुल्यमा पाइन्छ। जसलाई धोएर पुनः लगाउन पनि सकिन्छ। अन्य विकासशील देशमा पनि यही कपडाकै मास्क नै अत्यधिक प्रयोग भएको पाइन्छ।
कपडाको मास्कमा दुई पत्र हुन्छन् । कानमा अड्याउनका लागि प्रयोग गरिने डोरोले तानतुन पार्दा मास्क नै तानिन्छ । कपडाका मास्कमा करिब ८०–५०० माइक्रोमिटर ठूला प्वाल हुने अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यसैले तिनले धूलीकण त्यति राम्रोसँग छेक्न सक्दैनन्। अझ धोएर लगाउँदा र तन्काउँदा यस्ता मास्कको कण छान्ने क्षमता २० प्रतिशतभन्दा बढी ह्रास हुने हुन्छ।
कपडाको मास्कपछि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मास्क सर्जिकल वा मेडिकल मास्क हो जसमा प्रायः तीन पत्र हुन्छन् । विभिन्न अध्ययन अनुसार मास्क प्रयोग गर्नाले धूलोबाट हुने जोखिम, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने संक्रमण, सरुवा रोगको आपतकालीन अवस्थामा केही हदसम्म रोकथाम हुने गर्छ।
मास्क लगाउँदा रोग सर्नसक्ने सम्भावना घट्छ । प्रयोगकर्ताको मुख वा नाकबाट निस्कने सम्भाव्य दूषित पदार्थ अर्को व्यक्तिसम्म पुग्न रोकिन्छ। राम्ररी प्रयोग गर्न सक्यो भने मास्कले खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा निस्कने ठूला तरल कणमा भएका भाइरस, ब्याक्टेरिया लगायतका जीवाणु पनि सर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । त्यसै गरी मास्क लगाउँदा थुक वा र्‍याल र श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी स्राव अन्य व्यक्तिसम्म पुग्न पाउँदैन।
(लेखक आयुर्वेद चिकित्सक हुन्)
प्रतिभा पलायन रोक्न चुनौती
-प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले वि.सं. २०६८ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालको जनसंख्या करिब दुई करोड ६५ लाख देखाइएको छ । यस अन्तर्गत १४–५९ उमेर समूहका जनसंख्याको प्रतिशत ५७ रहेको छ । यसैको आधारमा देशमा प्रतिवर्ष करिब पाँच लाख श्रमशक्ति बजारमा आउने प्रक्षेपण गरिएको हो । एक अर्काे तथ्यांक अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष ५० हजार विद्यार्थीहरुले स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको देखाइएको छ । यसरी बजारमा आएका सबै शिक्षित एवं कोरा जनशक्तिलाई राष्ट्रले रोजगारीको अवसर जुटाउन सकेको पाइँदैन । देशभित्र रोजगारीको अवसर न्यून भएकै कारण एकातर्फ उच्च अध्ययन र अर्काेतर्फ रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या क्रमिक बढ्दो छ । विगत १५÷२० वर्षमा पुगनपुग ५० लाख श्रमिकहरु कामको खोजीमा खाडी मुलुकमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । नेपाल अहिले तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने १० देशभित्र मूल्यांकन गरिए पनि रोजगारीका लागि विदेश जानेको लर्काे न्यून गर्न सकेको छैन । यसैको क्षतिपूर्तिका रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए तापनि यसको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ ।
रोजगारीका सन्दर्भमा श्रम शक्ति विदेशिएका कारण यसले अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै २६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेछ, औसत ४५ प्रतिशत घर परिवारले कुनै न कुनै रुपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेका छन् र उनीहरुको दैनिकी केही सहज भएको छ, राष्ट्रिय प्रति व्यक्ति आय बढिरहेछ । त्यसको अर्काे पाटोबाट हेर्दा यसरी ठूलो संख्यामा युवा विदेशिंदा देशभित्र आवश्यक पर्ने श्रम शक्ति पनि विदेशबाट भित्र्याइनु परेको छ । श्रम शक्तिकै अभावमा हाम्रा खेतबारी बाँझा रहेका छन्, कृषिको उत्पादन घटेको छ । पारिवारिक विछोडले विभिन्न दृष्य अदृष्य समस्या सिर्जना गरिरहेछन् । यसरी विदेशिने अदक्ष कोरा श्रम शक्तिले तुलनात्मक रुपमा अपेक्षित विप्रेषण पनि भित्र्याउन सकेको पाइदैन । दैनिक भित्रिने विप्रेषणसँगै बन्द बाकसमा लास पनि भित्रिएका छन्, जसको करुण कहानी बेग्लै छ ।
रोजगारीका लागि विदेशिने कोरा श्रमको संख्या वार्षिक पाँच÷छ लाख रहेको छ भने उच्च अध्ययनको लागि वार्षिक २०÷२५ हजार विद्यार्थी विदेश गइरहेछन् । उच्च अध्ययनका लागि विदेशिनेहरुको मुख्य गन्तव्य अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत छ भने कोरा श्रम शक्ति मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, यु.ए.इ., आदि देशमा गइरहेछन् । उच्च अध्ययनका लागि विदेशिएका अधिकांश विद्यार्थी आफ्नो अध्ययनपछि, सार्क मुलुक बाहेक, उतै बसोबास गरी रोजगारीमा संलग्न हुने प्रवृत्ति देखिएको छ भने कोरा श्रममा लागि खाडी मुलुक गएका श्रम शक्ति तोकिएको अवधि पूरा गरेपछि सम्झौता अनुरुप स्वदेशमै फर्कन्छन् । यसमा केही अपवाद भिन्दै विषय हो ।
देशबाट शिक्षित र कोरा श्रमजीवी विदेशिनुका कारण भिन्न छन् । खासगरी शिक्षित युवा
(क) स्तरीय शिक्षाको आकांक्षा
(ख) अवसरको खोजी
(ग) परामर्शदातृ संस्थाको पहल
(घ) विदेशस्थित साथी भाईको सहयोग
(ङ) स्वदेशमा अवसरको कमी
(च) देशमा न्यून तलब भत्ता र वृत्ति विकासको झिनो अवसर
(छ) विदेशिने प्रवृत्ति र
(ज) देशमा विद्यमान राजनीतिकरण आदिका कारण विदेशिएका छन् । कोरा श्रमिकहरु
(क) देशमा रोजगारीको न्यून अवसर
(ख) काम गरेर पनि ज्याला नपाउने, ठगिने प्रवृत्ति
(ग) स्वदेशको तुलनामा विदेशको आय निकै आकर्षक
(घ) आफ्नो भविष्य सुरक्षित तुल्याउन आदिका कारण पलायन भइरहेछन् ।
देशमा कृषि क्रान्ति ल्याउन नसकेकाले त्यसको असर उद्योग विस्तारमा समेत परेको छ । फलतः यी दुवै क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर ज्यादै न्यून छ । सार्वजनिक सेवामा निजामती, सैनिक र प्रहरीतर्फ वार्षिक छ÷सात हजारको मात्र नयाँ भर्ना गरिन्छ । त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थान र अन्य निजी वित्तीय संस्थानमा पनि आठ÷दश हजारको मात्र नयाँ माग रहन्छ । केही संख्यामा अन्तर्रा्ष्ट्रिय र घरेलु गैरसरकारी संस्थाले समेत कर्मचारीको माग गर्दछन् । तर गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रमा भर्ना गरिने कर्मचारी उच्च कोटीको हुनुपर्ने भएकाले सर्वसाधारण सबैले ती पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसरी राष्ट्रको सेवा क्षेत्रमा कर्मचारी भर्नाको ढोका त्यति फराकिलो देखिन्न ।
उपरोक्त अवस्थाको ठीक विपरीत विदेशमा शिक्षा प्राप्त गर्न र आय आर्जनको समेत अवसर भएकाले युवा पिंढीको आकर्षण त्यतै भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसका साथै देशभित्र रोजगारी दिने सन्दर्भमा समावेशी कार्यक्रम लागू गरिएकाले पनि कतिपय अवस्थामा योग्य व्यक्तिहरु अवसरबाट बञ्चित गराइएका छन् । युवा विदेसिनुमा परोक्ष ढंगले राजनीतिकरणले समेत भूमिका निर्वाह गरिरहेछ । भनसुन, नातागोता र राजनीतिक आस्थाले नेपालको रोजगारी पद्दतिमा गहिरो जरा गाडेको कुरा नकार्न मिल्दैन ।
कोरा श्रमका लागि विदेशिने युवाले लोभलाग्दो आय आर्जन गर्नुका साथै तोकिएको क्षेत्रमा नयाँ ज्ञान सीप समेत सिक्छन् । लामो समय विदेशमा रही सेवा गरी स्वदेश फर्केका केही युवाले आफ्नै स्वतन्त्र व्यवसाय सञ्चालन गरेको, आफ्नो ज्ञान अनुभव अरुलाई पनि सिकाएको, आफ्नो दैनिकी आफ्नै बाहुवलमा सञ्चालन गरेको आदि पाइन्छ । यसका साथै विदेशमा रही शिक्षा प्राप्त गर्नु÷श्रम गर्नुलाई प्रत्येक उम्मेदवारले अवसरका रुपमा लिएको पनि बुझिएको छ । घर आँगनको परिधि नाघेर विदेश पुगेका जो कसैको विचार, व्यवहार, चेतना, संस्कार र सहकार्य गर्ने प्रवृत्तिमा ठूलो अन्तर पाइन्छ । यस्ता व्यक्तिले आफूलाई समाजमा स्थापित गर्ने मात्र नभई समाज बदल्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।
हाम्रो देशबाट शिक्षित एवं कोरा श्रम विदेशिने क्रम बढेपछि त्यसले विभिन्न दुष्परिणाम निम्त्याइरहेछ । कोरा श्रमको तुलनामा शिक्षित युवाको पलायनले राष्ट्रलाई दोहोरो असर पारिरहेछ । त्यस्ता जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रले ठूलो लगानी गरेको तर प्रतिफल विदेशी राष्ट्रले लिइरहेका छन् । देशमा विद्यमान अब्बल दर्जाका युवा पलायन हुँदा उनीहरुबाट प्राप्त गर्ने सेवा राष्ट्रले पाइरहेको छैन । देशको विकास दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन प्रतिभाहरुकै खाँचो देखिन्छ । उनीहरु विकास एवं परिवर्तनका संवाहक हुन् । प्रतिभा पलायनको क्रमले यो अभाव खट्किंदै गएको छ । यसैगरी कोरा श्रम विदेशिनाले देशमा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यमा लागि विदेशी श्रमिक भित्र्याउनु परिरहेछ । यसरी विदेशबाट श्रमिक भित्र्याउँदा उनीहरुलाई अतिरिक्त ज्याला÷पारिश्रमिक दिनु परेको छ । यस प्रकरणले परोक्ष रुपमा देशबाट पुँजी पलायन पनि भइरहेछ । विकास निर्माण कार्यमा वैदेशिक श्रमिकका कारण परियोजना समयमै सम्पन्न नहुने, लागत बढिरहेछ । विदेशी श्रमिकहरुलाई लामो समयसम्म रोजगारीमा संलग्न गराउँदा त्यसले कालान्तरमा देशको धर्म संस्कृति र राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्दछ ।
युवालाई रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम न्यून गर्न सर्वप्रथम देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनु पर्दछ । राष्ट्रले प्रदान गर्ने शिक्षा जीवन उपयोगी तुल्याई विभिन्न विषय र क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा प्रवद्र्धन गरी यस्ता शिक्षा प्राप्त गरेका युवालाई उनीहरुको ज्ञान र सीप अनुरुप काम गर्ने अवसर जुटाइनु पर्दछ । यसैगरी विदेशमा उच्च अध्ययन समाप्त गरी रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई स्वदेश फर्काउने, उनीहरुको अध्ययन र कार्य अनुभवको आधारमा रोजगारी प्रदान गर्ने, उनीहरुलाई दिइने पारिश्रमिक र वृत्ति विकासको उचित प्रबन्ध मिलाउने विषयमा समेत नीतिगत निर्णयको खाँचो देखिन्छ ।
देशको सर्वाङ्गिण विकास नभई आम नागरिकको हित गर्न सकिन्न । यस पक्षलाई आत्मसात गरी संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९० को दशक पश्चात् पूर्वाधारका रुपमा रहेको मानव स्रोतको विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो । यसको सान्दर्भिकता अद्यापि छँदैछ । आजको युगमा विज्ञान र प्रविधिको अकल्पनीय चमत्कारका कारण विश्व एक गाउँमा परिणत भइसकेको छ । अतः विपन्न र पछि परेका देशले समेत आफ्नो विकास अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिन्न । यस यथार्थलाई बोध गरी देशको जनसंख्या नीति कस्तो निर्धारण गर्ने, जनसंख्याको उपयोग कसरी गर्ने, श्रमको सम्मान कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट दिशाबोध गरिनु पर्दछ ।
भारतका एक प्रखर कविको चर्चित कविता छ, ‘अंधेरे में’ । त्यसमा एउटा खरो वाक्य छ, ‘पार्टनर, तुम्हारी पोलिटिक्स क्या हैं ?’ आजको लेख यही प्रश्नको वरिपरि घुमेको छ । लिटरेचर फेस्टिभलको मञ्चमा नाम चलेका एक लेखकको नयाँ किताब विमोचन कार्यक्रम चल्दै थियो । राजनीति कर्म र ‘जनपक्षीय’ (प्रचलित शब्दमा प्रगतिशील धारा) साहित्यमा बराबरी जोडिएका त्यस किताबका लेखकले आफ्ना ऊर्जाशील दिनहरू प्रगतिशील लेखनको विस्तार र उत्थानमा बिताएका छन् । भलै ‘प्रगतिशीलता’ अहिले दलविशेषको निरपेक्ष, अकिञ्चन समर्थक हुनु र वैचारिक दासत्व स्वीकार गर्नुसँग सरोकार राख्ने अर्थमा सीमित भएको छ, यो अर्कै कुरा हो ।
पछिल्लो समय ‘प्रगतिशील’ को अर्थ संकुचन हुँदैहुँदै दलविशेषको झन्डामा टाँस्सिएको, लेखनमा कम राजनीतिक दाउपेचमा ज्यादा सक्रिय (वा लेख्दै नलेख्नेसमेत) व्यक्ति नै प्रगतिशील हो भन्ने बनाइएको छ । जसरी हिजो राजारानीका वरिपरि घुमेर, तिनका प्रशस्ति लेखेर, तिनको जयजयकार गरेर, तिनको चाकरी गरी पद–पीठ पाउन र राज्यसंरक्षित मठाधीश बन्न सकिन्थ्यो, त्यही शैलीमा प्रशस्ति लेख्नेहरू, चाकरी गर्नेहरू नै ‘खाँटी प्रगतिशील’ मा दरिने भएपछि यो शब्द संकटमा परेको सत्य हो । त्यही भएर नै हो, प्रगतिशील लेखन र आन्दोलनमा लामो उमेर बिताएका पाका लेखक नै आफूलाई यतिखेर प्रगतिशील मान्न असुविधा प्रकट गर्छन् ।
लेखन एक प्रकारको उत्पादन हो । सोचको, विचारको उत्पादन । सोचहरू, विचारहरू इतिहासको बोधले बन्छन् । वर्तमानका सत्य–असत्य ठम्याउन इतिहास नबुझी सुख छैन अनि इतिहास घटना र मितिको ठेली मात्रै होइन, आज देखिने प्रभाव र परिणामको कार्यकारण हो भन्ने कुरा आम मानिसको पक्षबाट इतिहास चिन्तन गर्नेहरूले लगातार बताउँदै आएका छन् ।
लेखकले राजनीति गर्नु हुन्न वा लेख्नासाथ कोही पनि प्रगतिशील हुन्छ भनेर कोही बहस गर्न आयो भने त्यस्तो बहसको प्रस्थानविन्दु हुन्छ, ‘अरे पार्टनर, तिम्रो चैं पोलिटिक्स के हो ?’
पद ठूलो कि सेवा ?
केही समयअघि सरकारी संस्थामै कार्यरत एक जना साथीले गुनासो पोखिन्, ‘मेरा श्रीमान् काठमाडौं बाहिर छन् । दुई बच्चा र म काठमाडौंमा छौं । प्राविधिक सिफ्टको मेरो ड्यूटी रातको समयभन्दा अरु बेलामा सार्दिनुस् न, बच्चालाई स्कुल ल्याउन लैजान समस्या भयो, हेर्दिने कोही पनि छैन, यत्ति बिन्ती लिएर हाकिम सा’बकोमा गएको काँचै खाउँला जस्तै गरे ।
‘ए ! त्यस्तो समस्या भए बच्चा अफिसमा ल्याउनुस्, काम गर्नुस्, जसरी भए पनि आफ्नो ड्यूटी त पूरा गर्न पर्‍यो नि’ हाकिम कड्किएछन् । उमेरमा आफ्नो बुबा समानको मान्छे, काममा अनुभवी कसो सहयोग् नगर्लान् भन्ने विश्वास लिएकी साथी हाकिमको जवाफले बिलखबन्दमा परिन् ।
‘सरकारी कार्यालयमा पनि यतिसम्म पेलिनुपर्छ, यतिसम्म हाकिमहरू निर्दयी हुन्छन् भन्ने अनुभव पाँच वर्षको जागिरे दौरानमा बल्ल थाहा पाएँ’ साथी झन् दुस्ख पोख्दै गइन् । उनका पीडाले आफैंलाई नमिठोसँग घोचिरहयो । ‘मेरा श्रीमान् काठमाडौंमा हुँदा वा कोही आफन्त बच्चासँग साथै हुँदा रातको दस बजे आउनुपर्‍यो भन्दा पनि म तयार छु, काम गरिराखेकै छु, मेरो ड्यूटी नै प्राविधिक फिल्डको हो म बुझ्छु तर मलाइ समस्या पर्‍यो भन्दा बच्चा लिएर ड्यूटी गर भन्ने हाकिमको आत्मा छ कि छैन ? यो गुनासो कहाँ पोख्न जाने ? रातदिन घोटिएर पढेर नाम निकालेर खाएको जागिर हो कसैको कृपाले खाएको त होइन नि । तल्लो तहका कर्मचारी के मान्छे होइनन् ? उनीहरूको घर, परिवार, आफन्त कोही हुँदैनन् भन्ने ठान्छन् कि खै’? साथीले एकपछि अर्को दुखका पोका फुकाउँदै गइन् ।
‘ट्रेड युनियनमा लागेका, अलि पावरको फुइँ लगाउनेहरूले कामै नगरे पनि हाकिमको नजरमा राम्रो हुन्छन्, उनीहरूले जे चाह्यो हाकिम साब त्यही गर्न तयार हुन्छन् तर म जस्ता कतै पावर नहुने, पहुँच नपुग्नेहरूको सामू भने उनीहरूको आत्मा पत्थर बन्छ। मेरो ठाउँमा उनकी छोरी हुन्थी भने बच्चा लगेर अफिसको रातिको ड्यूटी गर भन्न सक्थे होला कि के गर्थे ? मैले रातिको ड्यूटीमात्रै हेरफेर गर्दिनु भनेको हो कामै गर्दिनँ भनेको पनि छैन नि’ ।
यही कुराले ती साथी धेरै दिनसम्म मानसिक तनावमा परिन् । आफूले जागिर खाने कि जागिरले आफूलाइ खाने निकै दोधारमा छु म साथीको नैराश्यपूर्ण भावनाले आफैलाई नमज्जा लागिरहयो । हाकिम साबले यत्ति कामलाई सहजीकरण गर्दिएको भए के फरक पथ्र्यो होला र ? ती साथीको रातिको ड्यूटी दिउँसो पार्दैमा कार्यालय उथुलपुथुल त पक्कै हुँदैनथ्यो होला । तर के गर्नु यहाँ जे गर्छ पद र पावरले मात्रै गर्छ साथी तिमी हामी सबै उस्तै हौं ढाडस दिनु बाहेक कुनै विकल्प थिएन आफूसँग पनि । हाकिम बन्नुभन्दा पहिले मान्छे बनिदिएको भए... सायद साथीले यो गुनासो पोख्ने थिइनन्।
एक जना चिनेकै दाइ काठमाडौंकै एउटा सरकारी कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत थिए । हाकिम भर्खर अफिस आइपुगेका थिए ती दाइको मोबाइलको घन्टी बज्यो । डेरामा प्रसूती हुने महिना लागेकी श्रीमतीलाई एक्लै छोडेर अफिस गएका दाइको सातो गयो, ल केही गाह्रो पो भयो कि ? बिहानै अफिस आएका दाइले हतारहतारमा फोन उठाए, श्रीमती बिसन्चो भएजस्तै भावमा बोलिन् । भर्खर नयाँ ठाउँमा कोठा सरेको, यसो हेरचाह गर्दिनु भन्न पनि कोही चिनेको छैन, तुरुन्तै अस्पताल पुर्‍याउनु पर्ने भयो, एक पटक हाकिमलाई बिन्ती गरेछन्, ‘हाकिम साब मेरो श्रीमतीलाई अस्पताल पुर्‍याउनु पर्ने भयो, लोकल गाडीमा जाँदा धेरै समय लाग्छ, भनेको बेलामा ट्याक्सी पनि पाइँदैन, आधा घण्टाको लागि गाडीमा जान सक्छु सर ?.., हतास मुहार अनुनय गरेका दाइतर्फ नहेरिकनै हाकिम साब आफ्नो काम गरिरहे ।
उता दाइको होसले ठाउँ छोडिसक्यो, छट्पटी भइसक्यो, के गर्ने ? के गर्ने ? मन बेचैन भए पनि हाकिमको तोलाको बचन कुरिरहे, ड्राइभरले त भनेकै थिए, एकवचन हाकिमलाई सोध म पुर्‍याइदिइहाल्छु नि भनेर तर हाकिम साब केही बोलेनन् । धेरै बेरपछि जवाफ फर्काएछन्, ‘एकछिनलाई गाडी दिन त हुन्थ्यो एक बजे मलाई मिटिङमा जानु छ के गर्ने होला’ ? भर्खर ११ बज्दैथ्यो दाइ केही नभनी, अँध्यारो मुहारमा बाटो लागे । बाटोमा निस्किएर गाडी कुरे बल्लतल्ल आयो, गाडी चढे जहाँ जाम पर्छ त्यहाँ ओर्लिए बाटो क्रस गरेर फेरि अर्को गाडी चढे, ट्याक्सी पनि पाइएन, ‘तीन वटा गाडी फेरेर डेरामा आएँ । श्रीमती रोइरहेकी थिइन्, श्रीमतीको त्यो हालत देख्दा मेरो पनि आँसु आयो’ दाइले दुखेसो पोखे ।ट्याक्सी खोजेर अस्पताल पुर्‍याउँदै थिएँ, हाकिमको गाडी देखें, मलाई एक बजे मिटिङ जानु छ भनेको हाकिमको गाडीमा हाकिमका श्रीमती, छोराछोरी सजिसजाउ भएर कतै पार्टीको लागि त्यहीँ बाटो भएर जाँदै थिए । ‘हाकिम साब तपाईको मिटिङ यही रहेछ, आज म जस्तो तल्लो तहको कर्मचारीप्रति जुन व्यवहार गर्नुभयो बाँचुञ्जेल सम्झिरहनेछु । धन्न भगवान् मेरी श्रीमतीलाई केही भएन, आमा र बच्चा बचाउन पाए तर हाकिमले दिएको चोट कसरी बिर्सौं ? मेरी श्रीमतीको ठाउँमा तपाईकी श्रीमती भएको भए ? पद होइन महोदय मान्छे बन्न सिक्नुस्, मेरो भन्नु यतिमात्रै छ धनी मर्दा पार्थिव शरीर बन्छ तर गरिब मर्दा लास, तिम्रो मेरो शरीर उस्तै हो हाकिम महोदय त्यही एकमुठी सास’ दाइले यत्ति भने ।
सरकारी सुविधाको गाडी हो, तपाईका आफन्तलाई भोजभतेरमा लैजान हुने, तपाईकै कार्यालयको कुनै कर्मचारीको जिन्दगीसँग जोडिएको सवालमा एकैछिन गाडी दिँदैमा तपाईको सर्वस्व हुने हो र ? तपाईका आफन्तको पार्टीभन्दा ठूलो ती करारमा कार्यरत दाइकी श्रीमतीको जिन्दगीको सवाल होइन र ? यस्ता कुरामा कहिले ध्यान जाने ?
केही समय पहिले मेरो साथीको दाइ सवारी दुर्घटनामा परे। दुर्घटना भन्नासाथ साथीको होस् उड्यो, आत्माले ठाउँ छोडिसक्यो । बाउआमा गाउँमै, यहाँ दुई जना दाइबहिनी मात्रै काठमाडौंमा बस्ने, दाइ कार्यालयबाट डेरातर्फ फर्कंदा दुर्घटनामा परेछन्, कसैले अस्पताल लाँदै गरेको जानकारी गराए, अफिसबाट फर्कंदै गरेकी साथी आकुलब्याकुल भएर अस्पताल पुगिन् ।
साथीले सुनाएको अप्रिय खबर सुनेपछि हामीहरू पनि हतारहतार अस्पताल पुग्यौं । अस्पतालको बेडमा दाइ रक्ताम्मे अवस्थामा थिए, होस् थिएन, जतिसक्दो चाँडो अपरेशन गर्नुपर्छ भन्दै थिए डाक्टरले । अपरेशनको लागि पैसा धरौटी राख्नुपर्ने त्यो पनि थोरै होइन, भन्दाबित्तिकै हामी कोही पनि एटिएम बन्न सक्दैनौं नि तर अस्पताल प्रशासन यति कठोर बन्यो कि छिटो पैसा डिपोजिट गरिहाल्नुस् अपरेशन ढिलो ग¥यो भने रिक्स हुन्छ, फिप्टी फिप्टी छ, केश अलि जटिल छ । जसरी पनि दाइ बचाउनु छ, पैसा भन्नासाथ कहाँबाट ल्याउने, डाक्टर साब हाम्रो दाइको अपरेशन गर्दिनुस् हामी पैसा जुटाइहाल्छौं, साथी रोइन्, कराइन, हामीहरू पनि अनुनय विनय ग¥यौं तर कसले सुन्ने ? डाक्टर, नर्सहरू त पत्थरै बन्दा रहेछन्, उनीहरूका आफन्त बिरामी पर्दैनन् जसरी ।
लागेको खर्च जहाँबाट जसरी भए पनि तिर्छौ भनेकै छौं तर उनीहरू भने पैसा जम्मा नभएसम्म अन्तिम अवस्थामा पुगेको बिरामीको अपरेशन गर्न सक्दैनन् । मानवीयता कहाँ गयो ? अस्पताल, डाक्टर, नर्स के का लागि ? दुर्घटना, कुनै पूर्वजानकारी गराएर हुँदैन भन्ने पक्कै उनीहरूलाई पनि थाहा छ तै पनि किन यस्तो व्यवहार गर्छन् । सबै आफन्तलाई फोन गरेर, हार गुहार गर्दै एक, दुई हजार जम्मा पार्दै दाइको अपरेशन गर्ने पैसा जम्मा पार्‍यौं, दैवसंयोग दाइको अपरेशन सफल भयो । मान्छेको ज्यानभन्दा पैसा ठूलो भएपछि कस्को के लाग्छ र ? डाक्टर भन्दा पहिले मान्छे बन्ने कहिले ? यो प्रश्न मनमा घोत्लिरहयो ।
अर्थशास्त्रमा मास्टर्स सकाएकी रमा शर्मा (नाम परिवर्तन) आमा नबन्दै गैरसरकारी संस्थामा जागिरे थिइन् । उनले महिनामा चालिस हजार तलब थाप्थिन्, श्रीमान् पनि गैरसरकारी संस्थाकै माथिल्लो पोस्टमा काम गर्थे । दुवैको कमाइ राम्रो थियो, बिहे भएको दुई वर्षपछि रमा जुम्ल्याहा बच्चाको आमा बनिन् । आमा बनेपछि उनले जागिर त्यागिन् । बच्चा एक वर्षका भएपछि उनलाई सरकारी जागिर खाने रहर जाग्यो । बच्चा हुर्काउँदै लोकसेवाको अध्ययन गर्न थालिन्, भाग्य र मिहिनेतले जित्यो उनले सुब्बामा नाम निकालिन् । घर सम्हाल्दै जुम्ल्याहा बच्चा हुर्काएर पनि हजारौं प्रतिस्पर्धीको भीडमा रमा अब्बल प्रतिस्पर्धी बनेर उदाइन् । उनको नाम अगाडि नै निस्किएको थियो, दुई बच्चा छन्, श्रीमानको जागिर काठमाडौंमै छ, काठमाडौंबाटै नाम निकालेपछि नजिकै पोष्टिङ पाइएला भन्ने लागेको थियो रमालाई । जब नियुक्ति पत्र समाइन् मन अमिलो भयो रमाको । लोकसेवा आयोगमा अगाडि नाम निकाल्नेहरूलाई ठाउँ रोज्न लगाइन्छ तर सार्वजनिक संस्थानमा त्यो नियम रहेनछ, अगाडि नाम निस्कँदा पनि उनको पोष्टिङ उपत्यका बाहिर भयो ।
जागिर नखाउँ भने बल्लतल्ल दूधे बच्चाको समय चोरेर पढेको लगानी छ, खाउँ भने श्रीमान् काठमाडौंमा, जुम्ल्याहा बच्चा कस्को जिम्मामा छोडेर उति टाढा जागिर खान जाऊँ ? निकै दोधारमा परिन् रमा । घरसल्लाह गरिन्, अफिसमा पनि चिनजानका नेता भनिनेहरूलाई हारगुहार गरिन्, तोकेको ठाउँमा गएर हाजिर गर पछि काजमा राजधानीमै तान्छौ भन्ने ओठे आश्वासन दिए । माइतीमा बच्चा छोडेर म्याग्दीमा जागिर खान गइन् । एक महिना जसोतसो बिताएकी रमा फेरि हाकिमसँग हारगुहार गर्न आइन्, बिन्ती बिसाइन् तर हाकिम पत्थर बने पग्लिएनन् ।
रमाको एकोहोरो गुनासो सुनेका हाकिमले कुर्सी घुमाउँदै भनेछन्, ‘हेर्नुस् रमाजी तपाई यहाँ जागिर खान आउनु भयो आफ्नो मर्जीले, तपाईले जागिर खोजेर आएको हो, जागिर वा यो अफिसले तपाईलाई खोजेको होइन । त्यही भएर जहाँ पोष्टिङ हुनु भा छ त्यही काम गर्नुस्, तपाईजस्ता बच्चाबालाको गुनासो सुन्न थाल्ने हो भने त महिला भर्ना बन्द गर्नुपर्छ’ । यति वचनले रमाको मनमा ज्वारभाटा चल्न थाल्यो, एक शब्द नबोली हाकिमको कोठाबाट बाहिरिइछन् रमा । ‘यतिसम्म निष्ठुरी हाकिम हुन्छन् भन्ने पहिलोपटक थाहा पाएँ, ५ वर्ष गैरसरकारी संस्थामा काम गरें कुनै दिन यस्तो अपमान भोग्नु परेन, सरकारी जागिरमा महिलाको समस्या सजिलै बुझिएला, महिलालाई काममा सहुलियत होला भनेर यति दुस्ख गरेर पढेँ हाकिमले यति मुटुमा बिज्ने गरी वचन ओकले त्यो सम्झँदा मनै मर्छ । आखिर ती हाकिमकी छोरी, बहिनी, श्रीमती मेरै स्थानमा भएको भए पनि उनको वचन यही हुन्थ्यो होला त’ ? रमाको प्रतिप्रश्न छ । लामो समयसम्म हाकिमका वचनको पीडाले डिप्रेसनको शिकार बनिन् रमा, परिवारको साथ र सर्पोटले विस्तारै आफैं सम्हालिन् थालिन् ।
रमा एउटी प्रतिनिधि पात्र हुन्, जुन महिला कर्मचारीको पहुँच छैन, पावर पुग्दैन उनीहरू सबभन्दा सुरक्षित, इज्जतदार मानिएको सरकारी क्षेत्रमै निकै प्रताडित हुँदै आएका छन् । महिला मात्रै होइन कतिपय स्थानमा पुरुष कर्मचारीहरू पनि हाकिमबाट निकै प्रताडित भएका खबरहरू सुनिन्छन् । तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू बढी प्रताडित छन् । हाकिमहरू यति निर्दयी बन्छन् कि मानौं उनीहरूलाई कहिल्यै कुनै समस्या पर्दैन, उनीहरूको परिवारका महिला पात्रहरू समस्याविहीन छन् जसरी । सम्पूर्ण हाकिम साबहरूलाई रमाको आग्रह छ कृपया पद, ओहोदाभन्दा पहिले तपाई मान्छे बन्न सिक्नुस् ।
नाम नछाप्ने सर्तमा समायोजनमा परेका चिनजानकै लेखा अधिकृतले केही समयअघि गुनासो गर्दै थिए, ‘नियमले भुक्तानी गर्न मिल्दैन, यो काम सरासर गैरकानुनी हो भन्ने मलाइ राम्रोसँग थाहा छ । त्यो कामको बारेमा हाकिम पनि जानकार हुँदै नभएको भन्ने त पक्कै होइन होला तर उनै हाकिमले कपिपय अवस्थामा यति दबाब दिन्छन् कि त्यो बेलामा मरिमरि पढेर नाम निकालेको जागिर निल्नु न ओकल्नु हुन्छ । हाकिमका कारण निकै तनाव हुन्छु कहिलेकाहीँ । हाकिमको आदेश नमान्दा आफू नराम्रो भइएला भन्ने पिर आदेश मान्दा कतिबेला कहाँ फसिएला भन्ने त्रास, यस्तो त्रासमा काम गर्दा मानसिकतामा कस्तो प्रभाव पर्छ ? घरपरिवारमा पनि राम्रोसँग खुलेर कुरा गर्न सकिँदैन, मनमा जतिबेला पनि जागिर र हाकिमकै तनाव हुन्छ’ । यी अधिकृतको मात्रै होइन समायोजनमा परेका लेखा अधिकृतहरूले मन्त्रालयमै धाएर गुनासो गरेका समाचार पुराना भएका छैनन् ।
गत वर्ष काठमाडौंकै एउटा सरकारी स्कुलको प्रअले गर्भवती शिक्षिकालाई प्रधानाध्यापकले माग गरेको बिदा समेत नदिँदा बच्चा खेर गयो । ती महिला जसले जागिरका कारण अनाहकमा संसार देख्ने अभिलाशा बोकेको बच्चा गुमाइन् । अबउपरान्त ती प्रअप्रति ती पीडित शिक्षिकाले हेर्ने धारणा कस्तो होला ? स्कुलका सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थीको अभिभावक हो प्रअ, तर अपशोच आफूले सम्मान गर्ने हाकिमको त्यो व्यवहार ती अभागी आमाले कसरी भुल्न सक्लिन् र ? आफ्नी छोरी, बुहारी त्यो अवस्थामा हुन्थे भने पनि ती प्रअले त्यस्तै व्यवहार गर्थे होला कि फरक ? नीतिगत भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा व्यवहारगत कुरा पनि गर्न सक्नुपर्छ । तर किन यति अप्रिय बन्छन् हाकिमहरू ? किन मन पत्थर बनाउँछन् ? कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्दिदैमा सर्वस्व जाने होइन नि तै पनि किन यस्तो हर्कत गर्छन ?
बिहे भएको ६ वर्षसम्म बच्चा नभएकी एक जना भाउजु गर्भवती भएपछि घरपायक सरुवा मिलाइदिन आग्रह गरिन्, ती हाकिम भाउजुको मामलामा निकै उदार बने । घरपायक सरुवा गरिदिए । अहिले सुत्केरी बिदामा बसेकी भाउजुले हाकिमको गुनलाई हरपल तारिफ गर्छिन् । भाउजुका दुई जना साथी सुत्केरी बिदा सकिन लाग्दा ठूलै तनावमा परेरे, वेतलवी बिदा माग्न जाँदा समेत बिदा दिएनछन्, तर उनको हकमा हाकिम भगवान बने, यस्ता हाकिम सबैतिर भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ, प्रसूती बिदासँगै ६ महिनासम्म वेतलवी प्रसूती बिदा लिन पाउने भनेर तर हाकिमले बिदा स्वीकृत गरिदिएनन् ।
मेरो आग्रह छ सम्पूर्ण हाकिमसाबहरूलाई कृपया तपाईहरूको बोली, व्यवहार र भोगाइका कारण कुनै पनि कर्मचारी डिप्रेसनमा नपरून्, रुष्ट नहोउन्, सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्दा के बिग्रन्छ र ? केही समयअघि हावर्ड विजनेश स्कुल र स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूले गरेको २ सयभन्दा बढी अध्ययनले कार्यालयको कामका सवालमा लिइने तनावले स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पु¥याउने र उक्त असर चुरोटभन्दा बढी हानिकारक हुने देखायो । ७५ प्रतिशत डिप्रेसनको कारक खराब प्रवृत्तिको हाकिम हो भन्ने तथ्य उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।
यदि कुनै कर्मचारी अनावश्यक दबाब दिइराख्ने हाकिमसँग बसेर काम गर्छ भने त्यो कर्मचारीको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने जिकिर उक्त प्रतिवेदनको थियो । कतिपय कर्मचारीहरू आफूले गर्दै आएको जागिर जाने पिरले पनि तनाव र दबाबमा काम गरिरहेका हुन्छन् । नराम्रो प्रवृत्तिको हाकिम सधैं रिसालु र हिंस्रक प्रवृत्तिका हुन्छन् । आफूले गरेको कामको उदाहरण दिँदै तिमीहरू यत्ति काम पनि गर्न सक्दैनौं भन्दै झर्कन्छन्, रुखो बोल्छन् । हाकिममा आफू मात्रै जान्ने सुन्ने हुँ भन्ने खालको नराम्रो अंहकार हुन्छ । हाकिमको नकारात्मक व्यवहारले कर्मचारीको भविष्यनै खतरामा पर्न सक्छ । तर, यसको विपरीत यदि तपाईंको हाकिम राम्रा छन्, सकारात्मक छन्, कर्मचारीसँग कार्यालयमा राम्रो व्यवहार गर्छन् भने कर्मचारी हरेक काममा सफल बन्न सक्छन् ।
तरकारीमा बढ्दो विषादीको प्रयोग
बढ्दो जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर अब हरेकका भान्छामा पनि पर्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण तरकारी तथा खाद्यान्नमा विभिन्न रोगका कीरा देखिन थालेकाले किसानले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अन्धाधुन्ध रूपमा विषादी प्रयोग गर्न थालेका छन् । कीरा वा शत्रुजीव व्यवस्थापन गर्न अन्य कुनै विकल्प नखोजी कडाभन्दा कडा विषादी प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न गएको छ । किसानमा जनचेतनाको कमीका कारण र वैकल्पिक उपाय नखोज्दा आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।
संविधानको धारा ४४ ले सुरक्षित र गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि आमउपभोक्ताले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । उल्टै बाध्य भएर विषादीयुक्त तरकारी खान विवश छन् । नचाहँदा–नचाहँदा पनि हरेकको भान्छामा दिनहुँ विषालु तरकारी पाकिरहेका छन्, जसले गर्दा ढुक्कसँग तरकारी खान सक्ने वातावरण पनि छैन । हरियो तरकारीमा विषादीको प्रयोग बढेका कारण मानिसमा गम्भीर खालका रोग लाग्ने गरेको पाइन्छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारस्थित प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण रिपोर्टअनुसार विभिन्न तरकारीमा बढी मात्रामा विषादी प्रयोग भएको पाइएको छ । रिपोर्टमा जनाइएअनुसार सिमी, काउली र गोलभेंडामा अत्यधिक विषादीको अवशेष पाइएको छ, जसका कारण ती तरकारीमा बढी मात्रामा विषादीको प्रयोग भएको स्वतः देखिन्छ ।
विगतको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा कालीमाटी बजारमा भित्रिने हरियो तरकारीमा विषादीको मात्रा बढेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १ हजार ८ सय ५० नमुनामा विषादी जाँच गर्दा तीनवटा नमुनामा मात्र विषादी पाइएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३ हजार १ सय २४ नमुनामा दुईवटामा विषादी पाइएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को २० माघसम्म १ हजार ४ सय २ वटा नमुनामध्ये १२ वटामा अत्यधिक विषादी पाइएको छ । चितवनबाट ल्याइएको काउलीमा परीक्षणपश्चात् बढी विषादी भएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विषादी प्रयोगशालामा १४ सय २ नमुना जाँच गर्दा १२ वटामा खान नमिल्ने रातो रङ देखाइएको थियो भने तीनवटामा केही दिन पर्खेर खान मिल्ने वा पहेँलो रङ र १३ सय ८७ नमुनामा खान मिल्ने पाइएको थियो ।
जबकि हरियो तरकारीमा विषादीको मात्रा ३५ प्रतिशत हुँदा खान मिल्छ । ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म हुँदा केही दिन पर्खेर खान मिल्छ भने ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा खान उक्त तरकारी खान मिल्दैन ।
नेपालमा बर्सेनि थुप्रै रकम विषादीमा खर्च हुन्छ, जुन रकम सहजै विदेश जान्छ । यदि जैविक विषादीको प्रयोग गर्ने हो वा शत्रुजीवको व्यवस्थापन गरी खेती गर्ने हो भने पक्कै पनि हानिकारक विषादीबाट आमउपभोक्ता पीडित हुनु पर्दैन । त्यसो त नेपालमा विषादीको प्रयोग भयावह रूपमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गैरहेको छ । बाली संरक्षण तथा वितरण केन्द्रका अनुसार नेपालमा पञ्जीकृत भएका १ सय १६ वटा विषादीहरू छन्, जसमध्ये ५२ वटा सामान्य कीटनाशक, ४० किसिमका भुसुनानाशक, दुई मुसानाशक र दुई किसिमका झारपातनाशक छन् । द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषण एकाइ स्थापनापछि कालिमाटीमा २०७१ असार ५ देखि तरकारीको नमुना परीक्षण थालिएको थियो । एकाइअन्तर्गतको प्रयोगशालाले तरकारीमा रासायनिक विषादीको मात्रा ९० प्रतिशतसम्म भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । विषादीको प्रयोग १० देखि १५ सम्म हुनुलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । त्यो जति बढ्दै गयो त्यति हानिकारक हुन्छ । प्रारम्भका दैनिक २० ÷२२ वटा तरकारीका नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्ने गरेकोमा अहिले मुस्किलले दैनिक तीन–चारवटा मात्रै नमुना परीक्षण गरिन्छ । सरकारले अन्य प्रदेशमा पनि तरकारी वा फलफूल परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ त्यसको हालत पनि उही कालीमाटीकै जस्तो छ ।
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रासायनिक विषादीविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएको संस्था पानको प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा हरेक वर्ष ४ करोड मानिसमा विषादीमा असर गरेको पाइएको छ । विश्वमा विषादीकै कारण हरेक वर्ष ३ लाख ५५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी बालबालिका र महिला छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिदिन ७ सय जना व्यक्ति विषादीयुक्त खानाका कारण मृत्यु भएको देखिन्छ ।
विश्वमा विषादी सेवन गरी आत्महत्या गर्ने मानिसको संख्या ३१ प्रतिशत रहेको छ । कृषिवस्तु उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि त्यसको प्रयोग महत्वपूर्ण मानिए पनि त्यसको सुरक्षित प्रयोग, भण्डारण, प्रयोग गर्ने तरिका र ज्ञानका अभावमा साथै त्यसको विसर्जन नगरिँदा जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ । कुनै विषादीको प्रयोग तत्कालै देखिन्छ भने कुनैको दीर्घकालसम्म असर पार्न सक्दछ ।
नेपालमा सर्वप्रथम विषादीको प्रयोग सन् १९५२ मा औलो रोग नियन्त्रण गर्न डीडीटी आयात गरिए पछि सुरु भएको हो, जुन प्रयोजनका लागि पुनः १९५५ मा डीडीटी आयात गरियो । त्यस्तै, नेपालमा विषादी उत्पादन गर्नका लागि सन् १९७७ मा कपिलवस्तुको बहादुरगन्जमा कारखाना नै स्थापना गरिएको थियो । नेपालमा कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने विषादी ज्यादै कममात्रामा रहेको छ । विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाले नेपालमा प्रतिहेक्टर ३९६ ग्राम मात्रै विषादीको प्रयोग हुने गरेको छ जुन विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा कम हो । जब कि माल्टामा प्रतिहेक्टर १६ केजी ७७ ग्राम रासायनिक विषादी प्रयोग हुने गर्छ । कोरियामा प्रतिहेक्टर १४ किलो ७४ ग्राम, जापानमा १४ किलो १८ ग्राम, चीनमा १० किलो ४५ ग्राम, अमेरिकामा ३ केजी ८ सय ८६ ग्राम रहेको छ भने भारतमा प्रतिहेक्टर २ सय ६१ ग्राम विषादी प्रयोग भइरहेको छ ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष भित्रिने विषादीमध्ये ८५ प्रतिशत तरकारी बालीमा प्रयोग हुन्छ । विश्वमा प्रतिवर्ष करिब २० लाख मेट्रिक टन विषादी प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । त्यसमा ४७ दशमलव ५५ झारनाशक, २९ दशमलव ५५ प्रतिशत कीटनाशक, १७ दशमलव ५५ प्रतिशत ढुुसीनाशक, ५ दशमलव ५५ प्रतिशत अन्य पर्छन् । विश्वमा करिब २ करोड ६० लाख मानिसमा बर्सेनि विषादीको असर परेको देखिन्छ भने करिब २२ लाख मानिसको मृत्यु यसको प्रयोगबाट हुने गरेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवम् विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ ।
तसर्थ नेपाल सरकारले पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित र गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्ने काम गर्ने दायित्व पूरा गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालीहरू बाध्य भएर विषादीयुक्त तरकारी खान विवश छन् र नचाहँदा–नचाहँदै पनि हरेक नेपालीको भान्छामा दिनहुँ विषालु तरकारी पाकिरहेका छन् । तरकारीमा विषादीको प्रयोग बढेका कारण नेपालीहरूमा गम्भीर खालका रोग लाग्ने गरेको पनि पाइएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारस्थित प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका रिपोर्टअनुसार मात्रै नभएर परीक्षणबिना नै हामीले खाइरहेको विभिन्न तरकारीमा बढी मात्रामा विषादी प्रयोग भएको छ । तसर्थ अत्यधिक विषादीको अवशेष नरहने गरी स्वस्थ तरकारी खाने वातावरण बनाउन पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । स्वस्थ नागरिक नै देशको धन हो । स्वस्थ नागरिक नभई देशको उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन, साथै स्वास्थ्यमा गर्ने खर्चको छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बजेट शिक्षा तथा अन्य विकाकका कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ ।
बैंक सञ्चालनमा बढ्दै जोखिम
सूचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तथा कारोबारको विस्तारले बैंकिङ क्षेत्रमा आन्तरिक जोखिम बढिरहेको छ । सञ्चालन जोखिम सामान्यतः व्यवसायको सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष संलग्नता भएको क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले व्यवसायमा संलग्न जनशक्ति, प्रक्रिया, प्रविधि तथा प्रणालीबाट सञ्चालन जोखिम उत्पन्न हुने गर्छ । हालै फर्जी कागज बनाएर १९ बैंकबाट रकम निकालिएको घटनाले त झन् नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई कठिन मोडमा पु¥याएको छ । संस्थाको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रणले सञ्चालन जोखिमलाई निम्त्याइरहेको हुन्छ । सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी दायित्व सम्बद्ध संस्थाको व्यवस्थापन र कर्मचारी र सञ्चालक समितिमा समेत हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम प्रहरी र प्रशासनले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्दैन तर पनि प्रहरीको सक्रियता र कार्यान्वयन प्रंशसनीय छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको इ.प्रा.निर्देशन नं. ५ र ०७४ अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले आफ्नो कारोबारसँग सम्बद्ध सञ्चालन जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेछ । साथै, आन्तरिक लेखापरीक्षकले प्रत्येक शाखा÷विभाग÷कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सञ्चालन जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न अवलम्बन भएका उपायहरूको पर्याप्तताको सम्बन्धमा समेत टिप्पणी गरेको हुनुपर्नेछ । सूचना प्रविधिबाट हुन सक्ने सञ्चालन जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्थालाई बढी प्रभावकारी बनाई सोको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणलाई व्यवस्थित गर्न सूचनाप्रविधि सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिएको छ । त्यस्तै तरलता व्यवस्थापन, कर्जा व्यवस्थापनमा, मर्जर र एक्वीजिशनमा समेत केन्द्रीय बंैकबाट कडा निर्देशन छ तापनि कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चालन जोखिम बढ्दै जाने प्रमुख कारण आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चुस्त र दुरुस्त नहुनु हो । सुशासन पनि कमजोर हुँदै जानु हो । त्यस्तै वित्तीय विवरण, शाखा तथा केन्द्रीय व्यवस्थापन पक्षको जोखिमप्रति राम्रो विश्लेषण र निगरानी नहुनु, नियामक निकायको कमजोर नियन्त्रण प्रणाली पनि कारक मानिन्छ । लेखापरीक्षणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा पूँजी पर्याप्तताको अभाव, कम्पनीमा कार्यरत जनशक्ति दक्ष नहुनु, आपराधिक गतिविधिमा बैंक कर्मचारीको संलग्नताले पनि जोखिम बढको छ । यसले बैंकको उत्पादकत्व, बजार शाख र नाफामा समेत असर गर्छ । पूँजी वृद्धि, आन्तरिक तथा बा≈य लेखापरीक्षण सञ्चालन जोखिम कम गर्न अपनाइएका विधिहरू हुन् । आन्तरिक र बाह्य जालसाजी, पदीय दुरुपयोग, भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानी, कार्यान्वयन, वितरण र प्रक्रियागत व्यवस्थापनमा फितलोपना आदिबाट आन्तरिक जोखिम वढ्छ । जोखिम वहन गर्ने नाममा हालका दिनहरूमा जथाभावी लगानी गरी नाफा कमाउनेमात्र बढी संलग्नता हुँदा बैंकलाई झनै नोक्सानी र बजार शाख कमजोर गराएको देखिन्छ ।
बैंकभित्रका सञ्चालन जोखिमहरूलाई कम गर्न कम्प्लायन्स विभाग, जोखिम व्यवस्थापन विभाग समेत स्थापना गरिएको पाइन्छ । सञ्चालन जोखिमलाई स्वीकार्य तहसम्म कायम गर्न न्यून लागतका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ । आचार संहिता निर्माण, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्यविभाजन, लेखापरीक्षण, कम्प्लायन्स, ग्राहक गुनासो जस्ता पक्षमा ध्यान दिए जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्छ । तर, नेपालको बैंकिङमा सहभागितामूलक व्यवस्थापन, जिम्मेवारी र प्रभावकारिताको अवस्था कमजोर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी एव बजार शाखमा समेत यसखालको जोखिमले गम्भीर असर पु¥याउँछ । आन्तरिक जालसाजी, बाह्य जालसाजी, कर्मचारीको अनुशासनहीनता, गोपनीयता एवम् सूचनाको दुरुपयोग, कर्मचारीको आन्तरिक कमीकमजोरी जस्ता पक्षले संस्थाको शाखलाई कमजोर बनाउँछ ।